Shwe Khit - Page 404 of 413 - Media and Entertainment
ဒီရကေခြိနျ အလှနျလှပတဲ့ သန်တာကြောကျတနျးကွီး
May 24, 2020 by Zaw Hein
“မာနျအောငျမွို့နယျမှာ ဒီရကေခြိနျ အလှနျလှပတဲ့ သန်တာကြောကျတနျးကွီး ပျေါထှကျလာလို့ လူထောငျခြီလာရောကျပွီး ခြိုးယူနကွေ”
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မာနျအောငျမွို့နယျ၊ ပွငျကောကျကြေးရှာအနီး ပငျလယျကမျးစပျတှငျ ဒီရကေသြှားခြိနျ အလှနျလှပသော သဘာဝ သန်တာကြောကျတနျးတဈခု ပျေါထှကျလာသဖွငျ့ သှားရောကျ ကွညျ့ရှုသူမြားဖွငျ့ အထူးစညျကားနသေညျဟု သတငျးရရှိသညျ။
မာနျအောငျမွို့မှ လူမှုရေးလူပျရှားဆောငျရှကျနသေူ ကိုကြျောမိုးနိုငျက “ ဒီသဘာဝ သန်တာကြောကျတနျးက အရငျကတညျးက ရှိပါတယျ။ ပွငျကောကျရှာအနီး ပငျလယျကမျးစပျမှာပါ။ အခုက ဒီရခေမျးခြိနျဆို ရပေျေါကနေ ပျေါထှကျလာတယျ။ ဒီရေ ကသြှားရငျ သန်တာကြောကျတနျးကို ဆငျးကွညျ့လို့ရတယျ။ ကြောကျပှငျ့၊ ကြောကျပနျးတှနေဲ့ အလှနျလှပတဲ့ အတှကျ ဒသေခံတှကေ သှားရောကျလညျပတျကွညျ့ရှုနကွေပါတယျ” ဟု သူက ပွောသညျ။
ထိုသို့ လညျပတျကွညျ့ရှုရာတှငျ တဈခြို့ လူငယျမြားက သန်တာကြောကျတနျးရှိ ပနျးပှငျ့မြားကဲ့သို့ လှပနသေညျ့ ကြောကျပှငျ့၊ ကြောကျပနျး၊ ကြောကျခကျမြားကို ခြိုးဖဲ့ ယူဆောငျနကွေသဖွငျ့ ၎င်းငျး သဘာဝသန်တာကြောကျတနျး ပကျြစီးသှားမညျကို စိုးရိမျနရေသညျဟု ဒသေခံမြားက ပွောဆိုသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ ဒီနေ့ နလေ့ယျလောကျဆိုရငျ သှားကွညျ့ဖိုိ့ရှိပါတယျ။ ဒီကြောကျတနျးကို ထိနျးသိမျးဖို့ ကျောမတီ တဈရပျဖှဲ့စညျးပွီး ကြှနျတျောတို့ ဆောငျရှကျသှားဖို့ရှိပါတယျ။
မပကျြမစီးရအောငျ ဒသေခံတှကေို ပညာပေးဟောပွောမှုတှေ ပွုလုပျပွီး တားဆီးသှားပါမယျ” ဟု ပွောကွားသညျ။
သန်တာကြောကျတနျးမှာ တဈမိုငျခနျ့ အရှညျရှိမညျဟု ခနျ့မှနျးရပွီး ပွငျကယျြကွီး တဈခုဖွဈနကော ဒီရကေပြွီး လုံးဝ ရစေဈသှားခြိနျတှငျ ပျေါထှကျလာခွငျးဖွဈသညျဟု မာနျအောငျ ဒသေခံ ကိုတငျဝငျးက ပွောဆိုသညျ။
“အရငျကတညျးက ဒီသန်တာကြောကျတနျးက ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု ဒီရအေကွီးအကယျြကတြော့ အပျေါကို ပျေါထှကျလာသလို ဖွဈနတေယျပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့ လူတှလေညျး ပိုသိလာတာပေါ့။ သန်တာကြောကျတနျးက ရအေောကျမှာ ရှိနတေော့ ကြောကျပနျးတှကေ လူတှေ လကျနဲ့ ဖဲ့ယူလို့ ရအောငျထိ မှနပေါတယျ။ အလှနျလှပတဲ့ သဘာဝ ကြောကျတနျးပါ” ဟု ပွောဆိုသညျ။
၎င်းငျးသဘာဝ သန်တာကြောကျတနျးကို လှနျခဲ့သော တဈရကျနှဈရကျစပွီး ဒသေခံ ပွညျသူမြား သှားရောကျ လညျပတျ ကွညျ့ရှုနကွေပွီး မလေ ၂၃ ရကျနကေ့ဆိုလြှငျ ဒသေခံ ပွညျသူ ထောငျနှငျ့ခြီပွီး လာကွညျ့ကွသညျဟု သိရသညျ။
“မာန်အောင်မြို့နယ်မှာ ဒီရေကျချိန် အလွန်လှပတဲ့ သန္တာကျောက်တန်းကြီး ပေါ်ထွက်လာလို့ လူထောင်ချီလာရောက်ပြီး ချိုးယူနေကြ”
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်မြို့နယ်၊ ပြင်ကောက်ကျေးရွာအနီး ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ဒီရေကျသွားချိန် အလွန်လှပသော သဘာဝ သန္တာကျောက်တန်းတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာသဖြင့်် သွားရောက် ကြည့်ရှုသူများဖြင့် အထူးစည်ကားနေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
မာန်အောင်မြို့မှ လူမှုရေးလူပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူ ကိုကျော်မိုးနိုင်က “ ဒီသဘာဝ သန္တာကျောက်တန်းက အရင်ကတည်းက ရှိပါတယ်။ ပြင်ကောက်ရွာအနီး ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာပါ။ အခုက ဒီရေခမ်းချိန်ဆို ရေပေါ်ကနေ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဒီရေ ကျသွားရင် သန္တာကျောက်တန်းကို ဆင်းကြည့်လို့ရတယ်။ ကျောက်ပွင့်၊ ကျောက်ပန်းတွေနဲ့ အလွန်လှပတဲ့ အတွက် ဒေသခံတွေက သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ထိုသို့ လည်ပတ်ကြည့်ရှုရာတွင် တစ်ချို့ လူငယ်များက သန္တာကျောက်တန်းရှိ ပန်းပွင့်များကဲ့သို့ လှပနေသည့် ကျောက်ပွင့်၊ ကျောက်ပန်း၊ ကျောက်ခက်များကို ချိုးဖဲ့ ယူဆောင်နေကြသဖြင့် ၎င်း သဘာဝသန္တာကျောက်တန်း ပျက်စီးသွားမည်ကို စိုးရိမ်နေရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ နေ့လယ်လောက်ဆိုရင် သွားကြည့်ဖိုိ့ရှိပါတယ်။ ဒီကျောက်တန်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကော်မတီ တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
မပျက်မစီးရအောင် ဒေသခံတွေကို ပညာပေးဟောပြောမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး တားဆီးသွားပါမယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
သန္တာကျောက်တန်းမှာ တစ်မိုင်ခန့် အရှည်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ပြင်ကျယ်ကြီး တစ်ခုဖြစ်နေကာ ဒီရေကျပြီး လုံးဝ ရေစစ်သွားချိန်တွင် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု မာန်အောင် ဒေသခံ ကိုတင်ဝင်းက ပြောဆိုသည်။
“အရင်ကတည်းက ဒီသန္တာကျောက်တန်းက ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီရေအကြီးအကျယ်ကျတော့ အပေါ်ကို ပေါ်ထွက်လာသလို ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် လူတွေလည်း ပိုသိလာတာပေါ့။ သန္တာကျောက်တန်းက ရေအောက်မှာ ရှိနေတော့ ကျောက်ပန်းတွေက လူတွေ လက်နဲ့ ဖဲ့ယူလို့ ရအောင်ထိ မွနေပါတယ်။ အလွန်လှပတဲ့ သဘာဝ ကျောက်တန်းပါ” ဟု ပြောဆိုသည်။
၎င်းသဘာဝ သန္တာကျောက်တန်းကို လွန်ခဲ့သော တစ်ရက်နှစ်ရက်စပြီး ဒေသခံ ပြည်သူများ သွားရောက် လည်ပတ် ကြည့်ရှုနေကြပြီး မေလ ၂၃ ရက်နေ့ကဆိုလျှင် ဒေသခံ ပြည်သူ ထောင်နှင့်ချီပြီး လာကြည့်ကြသည်ဟု သိရသည်။
အစ်စလာမျဘာသာဝငျတဈဦးဖွဈပမေယျ့ ဘုရားတညျရနျ လိုအပျနတေဲ့မွနေရောအကယျြကွီးကို ဗုဒ်ဓဘာသာဘုနျးကွီးကြောငျးသို့လှူဒါနျးမှုကွီး
ဒီပုံလေးကို အမှတျမထငျ ကွညျ့လိုကျမယျဆိုလြှငျ မွနျမာပွညျထဲက ဒသေတဈခုမှာလို့ ထငျမှတျမှားစရာပါ။နရောက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ အရှတေ့ောငျပိုငျး၊ ခဈြတကောငျးတိုငျးဒသေအတှငျးရှိ ဘနျဒါဘနျခရိုငျ မှာဖွဈပါသတဲ့။ အဆိုပါဒသေရဲ့ မွပေိုငျရှငျ စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ မစ်စတာမာဘူဘာရဲ့ အလှူပှဲတဈခုမှာဖွဈပါတယျ။
သူဟာ အစ်စလာမျဘာသာဝငျ တဈဦးဖွဈပမေယျ့ အဆိုပါဒသေရှိ မိဘမဲ့ကလေးမြားဂဟောတဈခုအတှကျ မွနေရောအကယျြကွီးတဈနရောကို ဗုဒ်ဓဘာသာဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတဈကြောငျးထံပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့သလို ပုံပါ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောမွတျကွီးတဈဆူကိုလညျး ထုလုပျပူဇျောခှငျ့ပွုခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ဒီပုံလေးကို အမှတျမထငျ ကွညျ့လိုကျမယျဆိုလြှငျ မွနျမာပွညျထဲက ဒသေတဈခုမှာလို့ ထငျမှတျမှားစရာပါ။နရောက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ အရှတေ့ောငျပိုငျး၊ ခဈြတကောငျးတိုငျးဒသေအတှငျးရှိ ဘနျဒါဘနျခရိုငျ မှာဖွဈပါသတဲ့။
အဆိုပါဒသေရဲ့ မွပေိုငျရှငျ စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ မစ်စတာမာဘူဘာရဲ့ အလှူပှဲတဈခုမှာဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အစ်စလာမျဘာသာဝငျ တဈဦးဖွဈပမေယျ့ အဆိုပါဒသေရှိ မိဘမဲ့ကလေးမြားဂဟောတဈခုအတှကျ မွနေရောအကယျြကွီးတဈနရောကို ဗုဒ်ဓဘာသာဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတဈကြောငျးထံပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့သလို ပုံပါ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောမွတျကွီးတဈဆူကိုလညျး ထုလုပျပူဇျောခှငျ့ပွုခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
သူဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါဒေသရှိ မိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာတစ်ခုအတွက် မြေနေရာအကျယ်ကြီးတစ်နေရာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းထံပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သလို ပုံပါ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတစ်ဆူကိုလည်း ထုလုပ်ပူဇော်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ဒီပုံလေးကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ထဲက ဒေသတစ်ခုမှာလို့ ထင်မှတ်မှားစရာပါ။နေရာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ချစ်တကောင်းတိုင်းဒေသအတွင်းရှိ ဘန်ဒါဘန်ခရိုင် မှာဖြစ်ပါသတဲ့။
ဆီးခြိုအတှကျ ကွကျမောကျစကေို့ ဘယျလိုသုံးမလဲ
ကွကျမောကျသီးဟာ လူကွိုကျမြားတဲ့ သဈသီးတဈမြိုးပါပဲ။ လလေ့ာတှရှေိ့မှုအရ ကွကျမောကျသီးမှာ သံဓါတျ ပိုတကျဆီယမျ နဲ့ ဗီတာမငျ C ဓါတျတှပေါဝငျပါတယျ။ အမြှငျဓတျပါဝငျမှုလညျး အနညျးငယျမွငျ့မားပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကွကျမောကျစကေ့ ကိုယျအလေးခြိနျကိုလညျး လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ ကွကျမောကျသီးကို စားရငျ အစကေို့ မစားတတျကွပမေဲ့ ကွကျမောကျစဟေ့ာ အဆိပျအတောကျမဖွဈစပေါဘူး။
ကာဗှနျဟိုကျဒရိတျ၊ ပရိုတငျးဓါတျတှပေါဝငျလို့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အာဟာရဓါတျတောငျ ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အဆီဓါတျလညျး ပါဝငျပါတယျ။
ကွကျမောကျစမှေ့ာ Hypoglycemic ဆိုတဲ့ သှေးတှငျး သကွားဓါတျကို လြှော့ခပြေးတဲ့ ဓါတျတဈမြိုးကို ထုတျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ အထူးသငျ့တျောပါတယျ။
ကွကျမောငျသီးအမှညျ့ ၄လုံး ၅ လုံးကို ယူပွီး စထေု့တျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ရဆေေးပွီး ခွောကျအောငျထားပါ။ အဲဒီနောကျ အစကေို့ အမှုနျ့ဖွဈအောငျ ကွိတျလိုကျပါ။ ပွီးရငျရထေညျ့ပွီး တဈနေ့ တဈခါသောကျပါ။
ကြက်မောက်သီးဟာ လူကြိုက်များတဲ့ သစ်သီးတစ်မျိုးပါပဲ။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ ကြက်မောက်သီးမှာ သံဓါတ် ပိုတက်ဆီယမ် နဲ့ ဗီတာမင် C ဓါတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓတ်ပါဝင်မှုလည်း အနည်းငယ်မြင့်မားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကြက်မောက်စေ့က ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်မောက်သီးကို စားရင် အစေ့ကို မစားတတ်ကြပေမဲ့ ကြက်မောက်စေ့ဟာ အဆိပ်အတောက်မဖြစ်စေပါဘူး။
ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတင်းဓါတ်တွေပါဝင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အာဟာရဓါတ်တောင် ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆီဓါတ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကြက်မောက်စေ့မှာ Hypoglycemic ဆိုတဲ့ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်ကို လျှော့ချပေးတဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
ဆီးချိုအတွက် ကြက်မောက်စေ့ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ
ကြက်မောင်သီးအမှည့် ၄လုံး ၅ လုံးကို ယူပြီး စေ့ထုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေဆေးပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။ အဲဒီနောက် အစေ့ကို အမှုန့်ဖြစ်အောင် ကြိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ရေထည့်ပြီး တစ်နေ့ တစ်ခါသောက်ပါ။
သငျရောဘယျနမှေ့ေးသလဲ ? မှေးနေ့..မှေးရကျမြားနဲ့ သူရဲ့ ဂုဏျသတ်တိမြား.
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၁) သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 2nd, 11th, 20th, 29th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၂) သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 3rd, 12th, 21st, 30th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၃) သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 4th, 13th, 22nd, 31st မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၄) သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 5th, 14th, 23rd မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၅) သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 6th, 15th, 24th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၆) သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 7th, 16th, 25th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၇ သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 8th, 17th, 26th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၈ သမား…
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 9th, 18th, 27th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၉) သမား…
မငျးဟာ..ပါးနပျတယျ..စကားကိုရှငျးရှငျးပွောတကျတယျ..ဟာသဉာဏျရှငျတယျ.. ခေါငျးမာတယျ. ရိုးသားတယျ.. တဖကျသားကို မနာလို ဝနျတိုတကျတယျ..ကွငျနာတကျတယျ..ဒေါသလှယျတယျ..
ဖျောရှတေယျ..တာဝနျယူလိုစိတျရှိတယျ..အမွဲတမျးကြျောကွားသူတယောကျဖွဈခငျြတယျ.. လူတှအေားလုံးရဲ့အထကျမှာပဲ နခေငျြတယျ.. တခါတရံမှာ လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးတယျ.. သူတပါးရဲ့အုပျခြုပျမှုကို မခံခငျြဘူး.
မိမိကိုယျကို ယုံကွညျတကျတဲ့ လူစားမြိုးဖွဈတယျ.. ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အခဈြကို တှတေ့ကျကွတယျ..ဒါပမေယျ့.. ရငျ့ကကျြတဲ့အရှယျရောကျမှပဲ လကျထကျဖွဈကွတာမြားပါတယျ..
အမွငျမတူတဲ့သူတှနေဲ့ ပွဿနာတကျရတာကို နှဈသကျတယျ.. အငွိုးအတေးကွီးပွီး..လကျစားခတြေကျကွတယျ..အသုံးအဖွုနျးကွီးသူတယောကျဖွဈပမေယျ့..
မငျးမှာ အလုပျအကိုငျကောငျးတှေ ရတကျပါတယျ.. မငျးသာ အမြိုးသားဆိုရငျ..အရမျးနာမညျကြျောမယျ.. ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျနမှောဖွဈပွီ..လူတိုငျးက မငျးကို လေးစားနပေါလိမျ့မယျ..မငျးဟာ.နရောစုံ ဝငျဆနျ့နိုငျတဲ့သူတယောကျဖွဈတယျ.. ရပျကှကျထဲမှသညျ.. ဟိုအပျေါ ပါလီမနျတှထေိကို
မငျးက နရောစုံသှားနိုငျသူပါ..ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့..ကိစ်စတျောတျောမြားမြားကို မငျးက တဖတျကနျခတျအောငျ သိနတေကျတယျလေ.. ဒါပမေယျ့..မငျ့ရဲ့ဘဝမှာ..တခြို့လူတှကေ မငျးဘဝနှိပျ့ကသြှားအောငျ..နာမညျပကျြသှားအောငျ လုပျတာမြိုး..ကွုံရတကျပါတယျ…
ဒါကလညျး မဆနျးပါဘူး…လူတှရေဲ့မနာလိုမှုကွောငျ့ပါပဲ.. မငျ့ရဲ့မိသားစုဘဝက အေးခမျြးလှနျပါတယျ.. မငျးဟာ အဖျောမှနျကောငျးကို ပိုငျဆိုငျပွီ.. ခဈြစဖှယျသားသမီးတှနေဲ့ နထေိုငျရပါလိမျ့မယျ..မငျးဟာ..ရှဆေ့ောငျသူ..လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသူ.. ဘာသာတရားကို ကိုယျရှိုငျးသူတယောကျပါပဲ..
မငျးရဲ့အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျ နံပါတျတှကေတော့.. 4, 6, 8 …သငျ့တငျတဲ့သူတှကေတော့.. 3, 5, 7!!!
မငျးဟာ ဘာကွီးပဲဖွဈနနေေ.. မငျးကို လူတိုငျးက ခဈြကွပါတယျ.. ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့..မငျးဟာလ နဲ့ တူလို့ပါ.. လကို လူတိုငျးက သဘောကသြလိုမြိုးပေါ့..
ပွီးတော့ မငျးဟာ..စိတျကူးအရမျးယဉျတကျသူ တဈဦးလညျးဖွဈတယျ… မငျးဟာ ကျိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုအလှနျနညျးတယျ..မငျးဘဝမှာ ပွနျပွီးသုံးသပျသငျ့စရာတှခေညျြးပဲ…
မငျးဟာ ခနျ့မှနျးရခကျတဲ့သူ တဈဦးလညျးဖွဈတယျ.. အခြိနျနဲ့အခွအေနကေို လိုကျပွီး မငျးဟာ အမွဲတမျးပွောငျးလဲနတေယျ.. တကိုယျကောငျးဆနျပွီ.. အနုပညာဘကျမှာ အားအတျောသနျတဲ့သူဖွဈတယျ.. အပွောအဆို
ညကျညောပွပွေဈတယျ. မငျးရဲ့အပွုအမှုတှဟော လလို့ပဲ.. နအေလငျးရောငျ ပြောကျမှ လထှကျလာသလိုမြိုး…. လူတှေ စိတျဓါတျကနြတေဲ့အခြိနျဆို ရောကျလာပွီ.. သူတို့တှေ စိတျဓါတျမွငျ့တကျလာပွီဆိုရငျ မငျးဟာ သူတို့ဘဝထဲက ပြောကျကှယျသှားတကျတယျ.. မငျးဟာ.. ငွိမျးခမျြးမှုကို မွတျနိုးတဲ့.ဒုတိယ ဂန်ဒီ ဖွဈနိုငျသလို…ငွိမျးခမျြးမှုကို ဖကျြဆီးမဲ့.. ဒုတိယ ဟဈတလာ လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ
(ကနြျောဆိုလိုတာက မငျးရဲ့ပတျဝနျးကငျြ ဆကျဆံရေးပျေါမှာပါ). တကယျ့လိုမြား..ဘုရားတရားကို နကျနကျရှိုငျးရှိုငျးလုပျမယျဆိုရငျ…မငျးဟာ အောငျမွငျမယျ့သူတဈဦးပါ… အမြားစုသော မငျးရဲ့စကားလုံးတှဟော ပြျောရှငျမှုတှဆေီကိုပဲ ဦးတညျနတောပါ..!
တခါတရံ မငျးဟာ ရှရေ့ေးကို ကွိုပွီး ခံစားမိတကျသူတဈဦးပါ. မငျးဟာ ကဗြာဆရာ..စာရေးဆရာ.. အနုပညာနယျပယျမှာ ကငျြလညျမှုသူတဈဦးပါ… မငျးဟာ အခဈြကို အရမျးကွီးမယုံကွညျတကျသူတဈဦးပါ.. မငျးလကျထကျပွီးတဲ့အထိတောငျ အဲဒီအတိုငျးပဲ
မငျးဟာ အခဈြအပျေါ သာမနျပဲခံစားနတေကျသူတဈဦပါ.. မငျးဟာ မိနျးကလေးဆိုရငျတော့..မိသားစုမှာ တာဝနျသိအမြိုးသမီးတဦးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ.. မငျးဟာ ယောကျြားလေးသာဆိုရငျတော့ မိသားစုမှာ ခိုကျရနျဖွဈတာတှေ..ငွငျးခုနျမှုတှကေို သယျဆောငျလာသူ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ..ဒါမှမဟုတျ ပွောငျးပွနျလညျး ဖွဈနတေကျပါတယျ..ဆိုလိုတာက.
မိသားစုကောငျးစားဖို့အတှကျ မငျးဘဝကိုတောငျ စှနျ့လှတျဖို့ ဝနျမလေးတဲ့သူတဈဦးပါ… မငျးဟာ သိမျ့မှတေ့ယျ..အမွငျကယျြတယျ..သူတပါးရဲ့စိတျကို ခံစားနားလညျပေးနိုငျတယျ.. လူတှနေဲ့ လိုကျလြောညီထှနေတေကျတဲ့သူ တဈဦးပါ…
မငျးရဲ့အကောငျးဆုံး အဖျောမှနျကတော့ 2, 5,9..တခွားသူတှနေဲ့ဆိုရငျတော့..အဆငျပွဖေို့ခဲ့ရငျးပါတယျ..!!!
နှလုံးသားမာကြောပွီ.. တကိုယျကောငျးဆနျတကျတယျ.. ဒါပမေယျ့ ဘာသာတရားကို ကိုငျးရှိုငျးတကျသူတဈဦးပါ.. တိုးတကျမှုကို မွတျနိုးတဲ့သူတဈဦးပါ.. မငျးဟာ မိသားစုပွဿနာတှကေို လြှော့ကဖြို့လိုလားပမေယျ့..
ပွဿနာတိုငျးက မငျးဆီကနပေဲ မွဈဖြားခံတကျတာမြားပါတယျ.. မငျးဟာ သွဇာအာဏာကွီးမားပွီး.. နှဈလိုဖှယျမကျြနှာထားကို ပိုငျဆိုငျသူ တဈဦးပါ.. ဒါကွောငျ့.. ဘယျနရောကိုသှားသှား.. မငျးအလိုရှိတာတှကေို အဆငျသငျ့ ရနိုငျနတောပေါ့..
မငျးဘဝမှာ မှေးဖှားလာကတညျးက တခုခုကို ရဖို့အတှကျ အမွဲတမျး ပွငျးထနျစှာကွိုးစှာနရေတကျတယျ.. မကွိုးစားဘဲနဲ့ ရလာတာဆိုတာ အလှနျပဲ ရှားပါးလှပါတယျ…. အရှယျရောကျလာတဲ့အခါမှာ.. မငျးဟာ ကိုယျ့ထကျငယျရှယျသူတှကေို ဆိုဆုံးမတကျတယျ..
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့.. ကွီးတဲ့သူကို ငယျသူက ရိုသမှေုပွသရတာကို မငျးဟာ နှဈသကျလို့ပဲ.. အဲလိုလညျး မငျးဟာ စံပွနလေရှေိ့ပါတယျ.. ဒါပမေယျ့..ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့.. မငျးဟာ အေးဆေးတညျငွိမျတဲ့သူတယောကျမဟုတျပါဘူး.. မငျးနဲ့ဆကျဆံဖို့ဆိုတာ..ခကျခဲတဲ့အလုပျတခုပါ..မငျးဟာ စိတျဓါတျမာတဲ့ ပွိုငျဘကျတယောကျလိုပဲ…
ဒါပမေယျ့လညျး.. တစုံတယောကျရဲ့အပွုအမှုကို မငျးသဘောကသြှားပွီဆိုလညျး.. မငျးတို့နှဈယောကျရဲ့ဆကျဆံရေးဟာ အရမျးကို ခိုငျမာနတေကျပါတယျ… မငျးဟာ အမွဲလိုလို..သူတပါးဆီက လေးစားမှုကို ရရှိနတေကျသူ တဈဦးပါ..
မငျးဘဝမှာ ရနျသူတှေ.ပွဿနာတှေ အမြားကွီးရှိမယျလို့ ထငျရပမေယျ့.. အဲဒါတှကေ ကွာရှညျမခံပါဘူး.. ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့.. မငျးက ပါရမီရှငျတယောကျလိုပါပဲ.. သူတို့နဲ့ဖွရှေငျးရာမှာ ပိုငျနိုငျလှနျးပါတယျ.. မငျးဟာ ပိုကျဆံကို အနညျးငယျပို မကျမောတဲ့အတှကျ.. သူရဲ့စခေိုငျးမှုအောကျမှာ..အဆုံးမရှိ ကွိုးစားခွငျးတှေ .ရုနျးကနျခွငျးတှနေဲ့..
မငျးဟာ နပနျးလုံးနရေတကျတယျ… မငျးဟာ အမြိုးသားတဈဦးဆိုရငျတော့..အားလုံးဟာ ပွီးပွညျ့စုံနပေါပွီ.. မိသားစုကို စောငျ့ရှောကျတယျ.. သူငယျခငျြးတှကေို ကူညီတယျ.. ဘဝကို ပေးကမျးမှုတှေ..ကွငျနာတှနေဲ့ အခြိနျကုနျလှနျစတေဲ့သူပေါ့ (ဒါပမေယျ့ ၂၁ ရကျ မှေးသူမပါပါ). ပွီးတော့ မငျးဟာ စံပွတယောကျဖွဈနပေါလိမျ့မယျ..
တကယျလို့..မငျးဟာ အမြိုးသမီးဆိုရငျလညျး.. အကငျြ့စရိုကျကောငျးတှေ.. ယဉျကြေးသိမျမှမှေု့တှေ.. အလုပျကွိုစားမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နမှောပါ.. မငျးဟာ လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသူ.. တီထှငျသူ.. ရညျမှနျးခကျြကွီးသူ..အာရုံစူးစိုကျလုပျတကျသူ
ပွီးတော့. ကမ်ဘာကို အလှ..မြှျောလငျ့ခကျြ..ပြျောရှငျမှုတှကေို သယျဆောငျလာသူ တဈဦးပါပဲ… မငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး အဖျောမှနျကတော့… 6, 9. သငျ့တျောတဲ့အဖျောမှနျကတော့..1, 3, 5!!!
မငျးလညျးပဲ ခေါငျးအလှနျမာတဲ့သူ တဦးပါပဲ.. အလုပျကို အရမျးကွိုးစားတယျ..ဒါပမေယျ့ ဘဝရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှမှောတော့ ကံမကောငျးတကျပါဘူး.. အေးဆေးနတေကျတယျ..ကူညီတကျသူဖွဈပေးမဲ့..စကားပွောတာက ပှငျ့လငျးလှနျးပါတယျ..
အမြိုးသားဆိုရငျတော့ အဲဒီအတှကျနဲ့ပဲ.. တခွားလူတှကေို စိတျအနှောကျယှကျပိုဖွဈစပွေီ.. မငျးကိုထားပွီ အဝေးကို ပွေးသှားတကျကွပါတယျ.. မငျးဟာ တခါတရံမှာတော့.. တခွားလူတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ ပွဿသနာတှကေို ကောငျးကောငျးကွီး နားလညျနပွေနျရော့…..
အခြိနျတိုငျးလိုလို မငျးဟာ အမြိုးသမီးမိတျဆှတှေနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးနတေကျပွီ.. အမြိုးသမီငယျတှနေဲ့ ပြျောရှငျရတာကို နှဈသကျသူ တဈဦးပါ.. မငျးသူငယျခငျြးတှဟော မငျးရဲ့အခြိနျတှေ..ငှတှေကေို သုံးဖွုနျးပွီ.. အဝေးကို ပွေးသှားတကျကွပါတယျ..
အဲဒီခါကွရငျတော့..မငျးဟာ ခိုးကျိုယျရာမဲ့နပွေီဆိုတာ..အသအေခြာပါပဲ..အဲဒီအတှကျ.. လုံးဝသတိပွုပါ.. မငျးရဲ့စီတျထားကောငျးကတော့.. မိသားစုနဲ့သူငယျခငျြးတှကေို ကူညီတကျတာပါပဲ.. မငျးဟာ ငယျရှယျစဉျမှာပဲ.. အခဈြကို တှရှေိ့တကျပါတယျ..
မငျးဘဝမှာ တခါတရံ အဆငျမပွမှေုတှနေဲ့ ပွညျ့နကျနတေကျတယျ.. ဥပမာ.. မငျးဟာ ဘှဲ့တခုခုရထားပမေယျ့..အလုပျလကျမဲ့ဖွဈနတောမြိုးပေါ့.. ဒါမှမဟုတျ.. အောကျခွအေလုပျကို လုပျနရေတာမြိုးပေါ့.. ဒါပမေယျ့..မငျးရဲ့မိသားစုကိုတော့..မငျးဟာ ကောငျးကောငျးစောငျ့ရှောကျနိုငျပါတယျ..
အဓီက သတိထားရမယျလူတှကေတော့.. မငျးရဲ့ကွငျနာတကျတဲ့ စိတျထားကို အခှငျ့ကောငျးယူမယျ့သူတှကေိုပါပဲ.. ဒါကွောငျ့..မငျ့နဲ့ပတျဝနျးကငျြဆကျဆံရေးကို အထူးသတိပွုပါ.. အမြိုးသမီးဆိုရငျတော့.. မငျးဟာ ပညာရပျပိုငျးနဲ့ အနုပညာပိုငျးမှာ
ထှနျးပေါကျနိုငျပါတယျ.. မငျးဟာ..စိတျရှညျတယျ.. ခေါငျးမာတယျ.. ရှေးရိုနညျးနညျးဆနျပွီ.. အစီအစဉျတကလြုပျကိုငျတကျသူတယောကျဖွဈတယျ… မငျးရဲ့အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျတှကေတော့.. 1, 8.သငျ့တျောတဲ့သူတှကေတော့…5, 6, 7!!!
မငျးဟာ မငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ကြျောကွားတဲ့သူတဈဦးပါ.. မငျ့ရဲ့နှုတျထှကျစကားလေးနဲ့တငျ..မငျးအလိုရှိရာကို ရနိုငျပါတယျ..မငျးဟာ စီးပှားရေးအမွငျစူးရှသူတဈဦးလညျး ဖွဈတယျ..
ဒါပမေယျ့.. မငျးဟာ စနဈရှိတော့မဟုတျပါဘူး..ခေါငျးထဲပျေါလာကို လုပျတကျသူပါ. တကယျလို့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတခုကို တညျထောငျမယျဆိုရငျလညျး..အောငျမွငျမယျသူပါ..
ပွီးတော့ ဟာသဉာဏျရှငျတဲ့သူလညျးဖွဈနပွေနျရော့.. မိသားစုနဲ့သူငယျခငျြးတှအေတှကျတော့.. မငျးဟာ တကယျ့ကယျတငျရှငျကွီးတဈဦးပါပဲ.. တကယျလညျး.. မငျးဟာ လကျတှကေ့ကြ ကူညီတကျသူတဈဦးပါ… မငျးဟာ နညျးနညျးတော့ မွှာပှတေကျပမေယျ့..
ဘဝကို တညျဆောကျမယျဆိုတဲ့အခါမှာတော့.. ကိုယျကြိုးတှကျ ကွညျ့ပွီးမှ ရှေးခယျြတကျသူပါ… မငျးဟာ လကျထကျပွီးတာတောငျမှ ကြျောကွားနဦေးမယျသူပါ..အဲဒီအတှကျ.. သတိထားရမယျအခကျြကတော့
မငျ့ရဲ့ ခွရှေုပျခငျြတဲ့ စိတျထားလေးပါပဲ.. အသိတရားနဲ့ ထိနျးခြုပျရငျတော့..အရာအားလုံး အဆငျပွနေပေါလိမျ့မယျ… မငျးဟာ လူတိုငျးနဲ့ ပုလဲနံသငျ့ပါတယျ..ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့.. နံပါတျ ၅ ဟာ အလယျဂဏာနျး ဖွဈနလေို့ပဲ..
ပွောငျးလဲမှုနဲ့လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသူ.. ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ မကျြနှာပိုငျရှငျပေါ့… အတှအေ့ကွုံကနေ မငျးဘဝကို တညျဆောကျရတဲ့သူဖွဈပွီ..အဲဒီအတှအေ့ကွုံတှကေပဲ..
မငျးရဲ့အကောငျးဆုံး ဆရာသမားတှဖွေဈနလေရေဲ့… မငျးရဲ့အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျကတော့…. 1, 2, 9. သငျ့တျောတဲ့သူကတော့. 6, 8!!!
အိုး… မငျး ပြျောရှငျဖို့အတှကျပဲ မှေးဖှားလာတာပါလား.. မငျးဟာ တခွားလူရဲ့ခံစားခကျြကို ဂရုမစိုကျတကျသူတဈဦးပေါ့..ဆိုလိုတာက မငျးဘဝမှာ မငျးဟာ အမွဲတမျး ပြျောရှငျနခေငျြတဲ့သူပါ.. မငျးဟာ ပညာရေး..အလုပျ..စီမံခနျ့ခှဲမှုမှာပဲဖွဈဖွဈ.. အောငျမွငျမှုသူတဈဦးပါ..
မငျးဟာ ကွငျနာတကျပါတယျ..(ဒါပမေယျ့ မငျ့စိတျထဲမှာ ကောငျးတယျလို့ထငျတဲ့ လူတှအေပျေါမှာသာ)…..
ရုပျရညျအရမျးခြျောမောနတေကျပွီ.. ဘဝဟာလညျး. ကံကောငျးခွငျးတှေ စုနတေကျပါတယျ.. ကံကွမ်မာကောငျးတှဟော မငျးနဲ့အတူလာတယျလို့ ပွောလို့ရနိုငျပါတယျ.. မငျးရဲ့စိတျထားနဲ့ခန်ဓာဟာ အခဈြကိစ်စတှမှော လှိုငျလှိုငျလှဲလှဲရှိလှပါတယျ..
တခွားနံပါတျတှရေဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ခံရတကျပါတယျ…ဒါပမေယျ့.. မငျးဟာ အမြိုးသားဆိုရငျတော့.. လကျထကျတဲ့အခြိနျအထိ မိနျးကလေးငယျမြားနဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးနရေတာကို နှဈသကျတဲ့သူတဦးပါ.. အမြိုးသမီးသာဆိုရငျတော့.. စစေ့ပျကွောငျးလမျးမှု..ဒါမှမဟုတျ လကျထကျတာကို စောစောစီးစီး ရငျဆိုငျရတကျပါတယျ.. ကွငျနာတကျသူတှပေဲ မငျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာပါလိမျ့မယျ..
ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့.. မငျးဟာ အိမျရဲ့ဆညျးလှညျးလေးပါပဲ… စာနာတကျသူ…နှဈသိမျ့မှုပေးနိုငျသူ.မြှတသူ.. အိမျထောငျမှုနိုငျနငျးသူ..ဆုံးဖွတျခကျြကောငျးမှနျသူတဈဦးပါပဲ…ကုနျကုနျပွောရရငျ.. မငျ့ရဲ့အကွငျနာတှနေဲ့..ဒီကမ်ဘာလောကကွီးရဲ့ ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှကေိုကုစားပေးနိုငျသူတယောကျပါပဲ…
မငျးရဲ့အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျတှကေတော့.. 1, 6, and 9. သငျ့လြျောတဲ့သူတှကေတော့.. 4, 5!!!
မငျးဟာ ဆှဲဆောငျမှုရှိသူ.. ယထာဘူတ ၀ါဒီတယောကျပါ.. မိမိကိုယျ့ကို ယုံကွညျတကျတယျ..ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေကျပွီ..ပညာရေးမှာ ထူးခြှနျသူ တဈဦးပါ.. ဂီတ.အနုပညာ..သီခငျြးဆို..သရုပျဆောငျနယျပယျတှမှောလညျး.. ထူးခြှနျနိုငျသူပါ..
မငျးရဲ့ပွဿနာကတော့..မငျ့ရဲ့ဒေါသစိတျပါပဲ.. အမြိုးသမီးဆိုရငျတော့. အထကျကအခကျြတှနေဲ့ မငျးဟာ အောငျမွငျနိုငျပါတယျ.. မငျးဟာ..မငျ့မိဘအတှကျ ဘာမဆို စှနျ့လှ့တျနိုငျသူလညျးဖွဈတယျ..(ဆိုလိုတာက မိသားစုကို အရမျးတနျးဖိုးထားတကျတာပါ)
အရှယျရလာတာနဲ့အမြှ မငျးရဲ့အဆငျ့အတနျးကလညျး တဖွညျးဖွညျး မွငျ့တကျနမှောပါ.. အမြိုးသားတဈဦးသားဆိုရငျတော့ အမြိုးသမီးထုကွားမှာ ရပေနျးစားမယျ့သူပါ..ဘကျစုံထူးခြှနျသူတဈဦးလညျးဖွဈနပေါတယျ..
နံပါတျ (၇) သမားအမြားစုဟာ သူတို့ရဲ့အိမျထောငျသညျဘဝမှာ အဆငျမပွကွေတာမြားပါတယျ.. အနညျးစုလောကျပဲ ပြျောရှငျခမျြးမွတေဲ့ဘဝကို တညျဆောကျနိုငျကွတာပါ…. မငျးရဲ့ဘဝမှာ အရာအားလုံးရှိနပေမေယျ့..
အလိုမကမြှုတှေ..စိုးရိမျကွောငျ့ကမြှုတှေ ကလညျး ရှိနတေကျပွနျရော့.. ဒါကလညျး..ဘုရားသခငျက မငျးကို အရာအားလုံးမြှတအောငျ ပေးထားတဲ့သဘောလို့ထငျပါတယျ.. မငျးလို ထူးခြှနျတဲ့သူ ၁ဝဝလောကျကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ
မငျးတယောကျလောကျပဲ အိမျထောငျရေးမသာယာတာမြိုးတှရေ့တကျပါတယျ.. ဒါကွောငျ့.. ကွငျဖျောကို စောငျ့စားနတောထကျ.. ကိုယျနဲ့ လိုကျလြျောညီထှမေယျ့သူကို စောစောစီးစီး ရှာထားသငျ့ပါတယျ…အဲလိုမှ မလုပျခငျြဘူးဆိုရငျတော့..မငျးဟာ ဘဝကို အထီးကနျြစှာ ဖွတျသနျးသှားရမှာ အသအေခြာပါပဲ..ဒါကွောငျ့..ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး သခြောဂရုစိုကျအလေးထားသငျ့ပါတယျ..
မငျးဟာ အံဖှယျကောငျးသော.ဖျောရှသေော.ယဉျကြေးသိမျ့မှသေ့ော ပြျောပြျောနတေကျတဲ့ လူတယောကျပါ..မငျးဟာ ဒီကမ်ဘာလောကကွီးကို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ မှေးဖှားလာသူတဈဦးပါ.. မငျးရဲ့အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျတှကေတော့.. 2. သငျ့တျောတဲ့အဖျောမှနျကတော့.. 1,4 !!!
မငျးရဲ့ ဘဝဟာ ကွမျးတမျးလှနျးပါတယျ. ဘာကွောငျ့ဆိုတာ. ဘယျသူမှ မငျးကို နားလညျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး.. သူတပါးကို အပွဈပွောရာမှာ မငျးဟာ တဖကျကမျးခတျ ကြှမျးကငျြလှပါတယျ.. မငျးရဲ့ ငယျစဉျဘဝဟာ ဆငျးရဲ့နုံခြာနိုငျပါတယျ.. အခွအေနကေ မပေးဘူးဆိုရငျတော့.. မငျ့ရဲ့မိဘတှကေိုတောငျ စောစီးစှာ လကျလှတျရနိုငျပါတယျ.. ဒီလိုမြိုးအဖွဈအပကျြတှကေ
မငျ့ဘဝထဲမှာ မကွာခဏဖွဈနမေယျအရာတှပေါ.. ဒီပွဿနာတှကေပဲ မငျးရဲ့ပညာရေးကို တားဆီးနပေါလိမျ့မယျ.. ဒါပမေယျ့ မငျးဟာ ဘဝကို တခွားနညျးနဲ့ လလေ့ာသငျယူနိုငျပါလိမျ့မယျ.
မငျးဟာ တရားမြှတမှုအတှကျ တိုကျပှဲဝငျရဲတဲ့သူတဈဦးပါ..ဒါပမေယျ့ အဲဒီတိုကျပှဲမှာပဲ ကဆြုံးနိုငျသူလညျး ဖွဈနပွေနျရော့. ပုံမှနျအားဖွငျ့..မိတျဆှတှေနေဲ့ဆကျဆံရာမှာ မငျးဟာ တညျကွညျလေးနကျစှာ နတေကျပွီ.. ဘဝကိုလညျး..အထီးကနျြစှာ
ဖွတျသနျးနရေမယျ့သူပါ.. ပွီးတော့ တပါးသူကို ကူညီဖို့အသငျ့ရှိနသေူ တဈဦးပါ.. မငျး အိမျထောငျကတြဲ့အခါမှာတော့ (အဲဒါကလညျး.. အမြားအားဖွငျ့ အလယျအလတျအရှယျမှာပဲ ဖွဈပှားတကျပါတယျ)
မငျ့ရဲ့ကံကွမ်မာဆိုးအနညျးငယျဟာ လှငျ့ပြောကျသှားသလို ခံစားရပါလိမျ့မယျ..ပွီးတော့ မငျးဟာ လုံခွုံခမျြးမွမှေု့ကို ရရှိပါလိမျ့မယျ.. မငျးဟာ မမြှျောလငျ့တဲ့အန်တရာယျတှကေိုလညျး..ယှဉျဆိုငျတှရေ့နိုငျပါတယျ.. ဥပမာ..( အမှုအခငျးမြား..အဆိပျရှိသတ်တဝါမြား..မတျောတဆထိချိုကျမှုမြားနဲံ ကွုံတှနေိုငျပါတယျ)
သိုပသေိ.. မငျးဟာ စညျးကမျးလိုကျနာတဲ့သူ..လုံ့လဝီရိယရှိသူ.ရဲရငျ့သူ.. ခှနျးအားဗလနဲ့ပွညျ့စုံသူ. တဈယောကျပါ.. အဲဒါတှကေပဲ မငျးကို အောငျမွငျမှုဆီကို ချေါဆောငျသှားမှာပါ..
မငျးဟာ မိသားစုရဲ့ အဓီက အစိတျအပိုငျးတခုပါ.. အားကိုယျရဆုံးသူတဈဦးလညျးဖွဈပွီး.. ဖိုကျတာတဈဦးလညျးဖွဈနပွေနျရော့… မငျးရဲ့ အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျကတော့.. 1, 4, and 8. သငျ့တျောတဲ့အဖျောမှနျကတော့ 5!!!
မငျးကတော့ ဒီကမ်ဘာလောကကွီးမှာ သဟဇာတမဖွဈဆုံး လူသားတဈဦးပေါ့.. မငျးဟာ ရုပျပိုငျး..စိတျပိုငျး အရမျးကို ကွံ့ခိုငျလှနျးသူတဈဦးပါ.. ရညျမှနျးခကျြကွီးမားသူတဦးလညျးဖွဈပွနျရော့.. မငျးဟာ အလုပျကို အရမျးကွိုးစားလုပျကိုငျရမှာဖွဈပွီ.. အောငျမွငျမှုကိုလညျး ခကျခဲစှာ ရယူရမယျ့သူတဈဦးပါ..
သာမနျအားဖွငျ့တော့ ငယျရှယျစဉျမှာ မငျးဟာ မိသားစုပွသနာတှနေဲ့ လုံးပနျးနရေတကျပါတယျ..ပွီးတော့ ဘဝဟာလညျး. ရုနျးရငျးဆနျခတျမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ.. ဒါပမေယျ့ မငျးအလိုရှိတာကို ရရှိတဲ့အခြိနျကစပွီးတော့ မငျးရဲ့ဘဝ လုံးဝပွောငျးလဲသှားပါလိမျ့မယျ.. မငျးဟာ ပတျဝနျးကငျြမှာ အလေးစားခံရဆုံးပုဂ်ဂိုလျတဈဦးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ..
စိနျချေါမှုတှကေို နှဈသကျပွီ.. ပွိုငျဘကျတှကေို အလှဲထိုးနိုငျတဲ့သူ တဈဦးပေါ့.. ငယျရှယျစဉျမှာတော့ မငျးဟာ အရမျးကို ပတေမေဲ့ ကလေးတယောကျပါ.. မိဘက မကွာခဏရိုကျနကျဆုံးမရသူ.. ရနျခဏခဏ ဖွဈတကျသူတဈဦးပေါ့.. မငျ့ဘဝဟာ ဒဏျရာအနာတရတှနေဲ့ ပွညျ့နကျနသေလိုပါပဲ.. ဒါပမေယျ့..အရှယျရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့..
မငျးဟာ အေးဆေးတညျငွိမျလာပွီ.. ယောကျြားပီသစှာ နထေိုငျပွနျရော့.. ခဈြခွငျးမတ်ေတာကတော့ မငျးအတှကျ လှယျကူတဲ့ကိစ်စတော့မဟုတျပါဘူး.. မငျးဟာ ဆောကျလုပျရေးအလုပျ..ဘဏျအလုပျတှနေဲ့ သငျ့လြှျောပါတယျ.. ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လူတှကေို မငျ့ကို ယုံကွညျ့ကွလို့ပါပဲ..
မငျ့ရဲ့မိသားစုဘဝကတော့ အရမျးကို ကောငျးမှနျလှပါတယျ. ဒါပမေယျ့ မငျ့ကလေးတှအေတှကျတော့ စိုးရိမျရပါလိမျ့မယျ.. မငျးဟာ လူလူခငျြးစာနာတကျသူ..စိတျရှညျသူ..ပညာဉာဏျကွီးမားသူ..နားလညျးခှငျ့လှတျပေးနိုငျသူတဈဦးပါ… မငျးဟာ ရညျမှနျးခကျြတှကေို ရယူဖို့.. အဂတိတရားမထားပဲ လူတှအေပျေါ အလုပျအကြှေးပွုဖို့ မှေးဖှားလာသူတဈဦးပါ…
သင်ရောဘယ်နေ့မွေးသလဲ ? မွေးနေ့..မွေးရက်များနဲ့ သူရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများ.
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၁) သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 2nd, 11th, 20th, 29th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၂) သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 3rd, 12th, 21st, 30th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၃) သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 4th, 13th, 22nd, 31st မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၄) သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 5th, 14th, 23rd မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၅) သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 6th, 15th, 24th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၆) သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 7th, 16th, 25th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၇ သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 8th, 17th, 26th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၈ သမား…
တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 9th, 18th, 27th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၉) သမား…
မင်းဟာ..ပါးနပ်တယ်..စကားကိုရှင်းရှင်းပြောတက်တယ်..ဟာသဉာဏ်ရွှင်တယ်.. ခေါင်းမာတယ်. ရိုးသားတယ်.. တဖက်သားကို မနာလို ဝန်တိုတက်တယ်..ကြင်နာတက်တယ်..ဒေါသလွယ်တယ်..
ဖော်ရွှေတယ်..တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိတယ်..အမြဲတမ်းကျော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်.. လူတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာပဲ နေချင်တယ်.. တခါတရံမှာ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတယ်.. သူတပါးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကို မခံချင်ဘူး.
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တက်တဲ့ လူစားမျိုးဖြစ်တယ်.. ငယ်ငယ်ရွှယ်ရွှယ်နဲ့ အချစ်ကို တွေ့တက်ကြတယ်..ဒါပေမယ့်.. ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်မှပဲ လက်ထက်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်..
အမြင်မတူတဲ့သူတွေနဲ့ ပြဿနာတက်ရတာကို နှစ်သက်တယ်.. အငြိုးအတေးကြီးပြီး..လက်စားချေတက်ကြတယ်..အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်..
မင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေ ရတက်ပါတယ်.. မင်းသာ အမျိုးသားဆိုရင်..အရမ်းနာမည်ကျော်မယ်.. ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပြီ..လူတိုင်းက မင်းကို လေးစားနေပါလိမ့်မယ်..မင်းဟာ.နေရာစုံ ဝင်ဆန့်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်.. ရပ်ကွက်ထဲမှသည်.. ဟိုအပေါ် ပါလီမန်တွေထိကို
မင်းက နေရာစုံသွားနိုင်သူပါ..ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့..ကိစ္စတော်တော်များများကို မင်းက တဖတ်ကန်ခတ်အောင် သိနေတက်တယ်လေ.. ဒါပေမယ့်..မင့်ရဲ့ဘဝမှာ..တချို့လူတွေက မင်းဘဝနှိပ့်ကျသွားအောင်..နာမည်ပျက်သွားအောင် လုပ်တာမျိုး..ကြုံရတက်ပါတယ်…
ဒါကလည်း မဆန်းပါဘူး…လူတွေရဲ့မနာလိုမှုကြောင့်ပါပဲ.. မင့်ရဲ့မိသားစုဘဝက အေးချမ်းလွန်ပါတယ်.. မင်းဟာ အဖော်မွန်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ပြီ.. ချစ်စဖွယ်သားသမီးတွေနဲ့ နေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်..မင်းဟာ..ရှေ့ဆောင်သူ..လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူ.. ဘာသာတရားကို ကိုယ်ရှိုင်းသူတယောက်ပါပဲ..
မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်မွန် နံပါတ်တွေကတော့.. 4, 6, 8 …သင့်တင်တဲ့သူတွေကတော့.. 3, 5, 7!!!
မင်းဟာ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေ.. မင်းကို လူတိုင်းက ချစ်ကြပါတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့..မင်းဟာလ နဲ့ တူလို့ပါ.. လကို လူတိုင်းက သဘောကျသလိုမျိုးပေါ့..
ပြီးတော့ မင်းဟာ..စိတ်ကူးအရမ်းယဉ်တက်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်… မင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအလွန်နည်းတယ်..မင်းဘဝမှာ ပြန်ပြီးသုံးသပ်သင့်စရာတွေချည်းပဲ…
မင်းဟာ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်.. အချိန်နဲ့အခြေအနေကို လိုက်ပြီး မင်းဟာ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်.. တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီ.. အနုပညာဘက်မှာ အားအတော်သန်တဲ့သူဖြစ်တယ်.. အပြောအဆို
ညက်ညောပြေပြစ်တယ်. မင်းရဲ့အပြုအမှုတွေဟာ လလို့ပဲ.. နေအလင်းရောင် ပျောက်မှ လထွက်လာသလိုမျိုး…. လူတွေ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အချိန်ဆို ရောက်လာပြီ.. သူတို့တွေ စိတ်ဓါတ်မြင့်တက်လာပြီဆိုရင် မင်းဟာ သူတို့ဘဝထဲက ပျောက်ကွယ်သွားတက်တယ်.. မင်းဟာ.. ငြိမ်းချမ်းမှုကို မြတ်နိုးတဲ့.ဒုတိယ ဂန္ဒီ ဖြစ်နိုင်သလို…ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖျက်ဆီးမဲ့.. ဒုတိယ ဟစ်တလာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
(ကျနော်ဆိုလိုတာက မင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာပါ). တကယ့်လိုများ..ဘုရားတရားကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်…မင်းဟာ အောင်မြင်မယ့်သူတစ်ဦးပါ… အများစုသော မင်းရဲ့စကားလုံးတွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေဆီကိုပဲ ဦးတည်နေတာပါ..!
တခါတရံ မင်းဟာ ရှေ့ရေးကို ကြိုပြီး ခံစားမိတက်သူတစ်ဦးပါ. မင်းဟာ ကဗျာဆရာ..စာရေးဆရာ.. အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်မှုသူတစ်ဦးပါ… မင်းဟာ အချစ်ကို အရမ်းကြီးမယုံကြည်တက်သူတစ်ဦးပါ.. မင်းလက်ထက်ပြီးတဲ့အထိတောင် အဲဒီအတိုင်းပဲ
မင်းဟာ အချစ်အပေါ် သာမန်ပဲခံစားနေတက်သူတစ်ဦပါ.. မင်းဟာ မိန်းကလေးဆိုရင်တော့..မိသားစုမှာ တာဝန်သိအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်.. မင်းဟာ ယောကျာ်းလေးသာဆိုရင်တော့ မိသားစုမှာ ခိုက်ရန်ဖြစ်တာတွေ..ငြင်းခုန်မှုတွေကို သယ်ဆောင်လာသူ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်..ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းပြန်လည်း ဖြစ်နေတက်ပါတယ်..ဆိုလိုတာက.
မိသားစုကောင်းစားဖို့အတွက် မင်းဘဝကိုတောင် စွန့်လွတ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူတစ်ဦးပါ… မင်းဟာ သိမ့်မွေ့တယ်..အမြင်ကျယ်တယ်..သူတပါးရဲ့စိတ်ကို ခံစားနားလည်ပေးနိုင်တယ်.. လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေတက်တဲ့သူ တစ်ဦးပါ…
မင်းရဲ့အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ကတော့ 2, 5,9..တခြားသူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့..အဆင်ပြေဖို့ခဲ့ရင်းပါတယ်..!!!
နှလုံးသားမာကျောပြီ.. တကိုယ်ကောင်းဆန်တက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းတက်သူတစ်ဦးပါ.. တိုးတက်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ဦးပါ.. မင်းဟာ မိသားစုပြဿနာတွေကို လျှော့ကျဖို့လိုလားပေမယ့်..
ပြဿနာတိုင်းက မင်းဆီကနေပဲ မြစ်ဖျားခံတက်တာများပါတယ်.. မင်းဟာ သြဇာအာဏာကြီးမားပြီး.. နှစ်လိုဖွယ်မျက်နှာထားကို ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦးပါ.. ဒါကြောင့်.. ဘယ်နေရာကိုသွားသွား.. မင်းအလိုရှိတာတွေကို အဆင်သင့် ရနိုင်နေတာပေါ့..
မင်းဘဝမှာ မွေးဖွားလာကတည်းက တခုခုကို ရဖို့အတွက် အမြဲတမ်း ပြင်းထန်စွာကြိုးစွာနေရတက်တယ်.. မကြိုးစားဘဲနဲ့ ရလာတာဆိုတာ အလွန်ပဲ ရှားပါးလှပါတယ်…. အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ.. မင်းဟာ ကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်သူတွေကို ဆိုဆုံးမတက်တယ်..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့.. ကြီးတဲ့သူကို ငယ်သူက ရိုသေမှုပြသရတာကို မင်းဟာ နှစ်သက်လို့ပဲ.. အဲလိုလည်း မင်းဟာ စံပြနေလေ့ရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့်..ယေဘုယျအားဖြင့်တော့.. မင်းဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး.. မင်းနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ..ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တခုပါ..မင်းဟာ စိတ်ဓါတ်မာတဲ့ ပြိုင်ဘက်တယောက်လိုပဲ…
ဒါပေမယ့်လည်း.. တစုံတယောက်ရဲ့အပြုအမှုကို မင်းသဘောကျသွားပြီဆိုလည်း.. မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ အရမ်းကို ခိုင်မာနေတက်ပါတယ်… မင်းဟာ အမြဲလိုလို..သူတပါးဆီက လေးစားမှုကို ရရှိနေတက်သူ တစ်ဦးပါ..
မင်းဘဝမှာ ရန်သူတွေ.ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိမယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်.. အဲဒါတွေက ကြာရှည်မခံပါဘူး.. ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့.. မင်းက ပါရမီရှင်တယောက်လိုပါပဲ.. သူတို့နဲ့ဖြေရှင်းရာမှာ ပိုင်နိုင်လွန်းပါတယ်.. မင်းဟာ ပိုက်ဆံကို အနည်းငယ်ပို မက်မောတဲ့အတွက်.. သူရဲ့စေခိုင်းမှုအောက်မှာ..အဆုံးမရှိ ကြိုးစားခြင်းတွေ .ရုန်းကန်ခြင်းတွေနဲ့..
မင်းဟာ နပန်းလုံးနေရတက်တယ်… မင်းဟာ အမျိုးသားတစ်ဦးဆိုရင်တော့..အားလုံးဟာ ပြီးပြည့်စုံနေပါပြီ.. မိသားစုကို စောင့်ရှောက်တယ်.. သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီတယ်.. ဘဝကို ပေးကမ်းမှုတွေ..ကြင်နာတွေနဲ့ အချိန်ကုန်လွန်စေတဲ့သူပေါ့ (ဒါပေမယ့် ၂၁ ရက် မွေးသူမပါပါ). ပြီးတော့ မင်းဟာ စံပြတယောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်..
တကယ်လို့..မင်းဟာ အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်း.. အကျင့်စရိုက်ကောင်းတွေ.. ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုတွေ.. အလုပ်ကြိုစားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေမှာပါ.. မင်းဟာ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူ.. တီထွင်သူ.. ရည်မှန်းချက်ကြီးသူ..အာရုံစူးစိုက်လုပ်တက်သူ
ပြီးတော့. ကမ္ဘာကို အလှ..မျှော်လင့်ချက်..ပျော်ရွှင်မှုတွေကို သယ်ဆောင်လာသူ တစ်ဦးပါပဲ… မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ကတော့… 6, 9. သင့်တော်တဲ့အဖော်မွန်ကတော့..1, 3, 5!!!
မင်းလည်းပဲ ခေါင်းအလွန်မာတဲ့သူ တဦးပါပဲ.. အလုပ်ကို အရမ်းကြိုးစားတယ်..ဒါပေမယ့် ဘဝရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေမှာတော့ ကံမကောင်းတက်ပါဘူး.. အေးဆေးနေတက်တယ်..ကူညီတက်သူဖြစ်ပေးမဲ့..စကားပြောတာက ပွင့်လင်းလွန်းပါတယ်..
အမျိုးသားဆိုရင်တော့ အဲဒီအတွက်နဲ့ပဲ.. တခြားလူတွေကို စိတ်အနှောက်ယှက်ပိုဖြစ်စေပြီ.. မင်းကိုထားပြီ အဝေးကို ပြေးသွားတက်ကြပါတယ်.. မင်းဟာ တခါတရံမှာတော့.. တခြားလူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပြဿသနာတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်နေပြန်ရော့…..
အချိန်တိုင်းလိုလို မင်းဟာ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေတက်ပြီ.. အမျိုးသမီငယ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ရတာကို နှစ်သက်သူ တစ်ဦးပါ.. မင်းသူငယ်ချင်းတွေဟာ မင်းရဲ့အချိန်တွေ..ငွေတွေကို သုံးဖြုန်းပြီ.. အဝေးကို ပြေးသွားတက်ကြပါတယ်..
အဲဒီခါကြရင်တော့..မင်းဟာ ခိုးကိုယ်ရာမဲ့နေပြီဆိုတာ..အသေအချာပါပဲ..အဲဒီအတွက်.. လုံးဝသတိပြုပါ.. မင်းရဲ့စီတ်ထားကောင်းကတော့.. မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီတက်တာပါပဲ.. မင်းဟာ ငယ်ရွှယ်စဉ်မှာပဲ.. အချစ်ကို တွေ့ရှိတက်ပါတယ်..
မင်းဘဝမှာ တခါတရံ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတက်တယ်.. ဥပမာ.. မင်းဟာ ဘွဲ့တခုခုရထားပေမယ့်..အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့.. ဒါမှမဟုတ်.. အောက်ခြေအလုပ်ကို လုပ်နေရတာမျိုးပေါ့.. ဒါပေမယ့်..မင်းရဲ့မိသားစုကိုတော့..မင်းဟာ ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်..
အဓီက သတိထားရမယ်လူတွေကတော့.. မင်းရဲ့ကြင်နာတက်တဲ့ စိတ်ထားကို အခွင့်ကောင်းယူမယ့်သူတွေကိုပါပဲ.. ဒါကြောင့်..မင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးကို အထူးသတိပြုပါ.. အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့.. မင်းဟာ ပညာရပ်ပိုင်းနဲ့ အနုပညာပိုင်းမှာ
ထွန်းပေါက်နိုင်ပါတယ်.. မင်းဟာ..စိတ်ရှည်တယ်.. ခေါင်းမာတယ်.. ရှေးရိုနည်းနည်းဆန်ပြီ.. အစီအစဉ်တကျလုပ်ကိုင်တက်သူတယောက်ဖြစ်တယ်… မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်တွေကတော့.. 1, 8.သင့်တော်တဲ့သူတွေကတော့…5, 6, 7!!!
မင်းဟာ မင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျော်ကြားတဲ့သူတစ်ဦးပါ.. မင့်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလေးနဲ့တင်..မင်းအလိုရှိရာကို ရနိုင်ပါတယ်..မင်းဟာ စီးပွားရေးအမြင်စူးရှသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်တယ်..
ဒါပေမယ့်.. မင်းဟာ စနစ်ရှိတော့မဟုတ်ပါဘူး..ခေါင်းထဲပေါ်လာကို လုပ်တက်သူပါ. တကယ်လို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကို တည်ထောင်မယ်ဆိုရင်လည်း..အောင်မြင်မယ်သူပါ..
ပြီးတော့ ဟာသဉာဏ်ရွှင်တဲ့သူလည်းဖြစ်နေပြန်ရော့.. မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့.. မင်းဟာ တကယ့်ကယ်တင်ရှင်ကြီးတစ်ဦးပါပဲ.. တကယ်လည်း.. မင်းဟာ လက်တွေ့ကျကျ ကူညီတက်သူတစ်ဦးပါ… မင်းဟာ နည်းနည်းတော့ မြှာပွေတက်ပေမယ့်..
ဘဝကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့.. ကိုယ်ကျိုးတွက် ကြည့်ပြီးမှ ရွှေးချယ်တက်သူပါ… မင်းဟာ လက်ထက်ပြီးတာတောင်မှ ကျော်ကြားနေဦးမယ်သူပါ..အဲဒီအတွက်.. သတိထားရမယ်အချက်ကတော့
မင့်ရဲ့ ခြေရှုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ထားလေးပါပဲ.. အသိတရားနဲ့ ထိန်းချုပ်ရင်တော့..အရာအားလုံး အဆင်ပြေနေပါလိမ့်မယ်… မင်းဟာ လူတိုင်းနဲ့ ပုလဲနံသင့်ပါတယ်..ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့.. နံပါတ် ၅ ဟာ အလယ်ဂဏာန်း ဖြစ်နေလို့ပဲ..
ပြောင်းလဲမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူ.. ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်ပေါ့… အတွေ့အကြုံကနေ မင်းဘဝကို တည်ဆောက်ရတဲ့သူဖြစ်ပြီ..အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကပဲ..
မင်းရဲ့အကောင်းဆုံး ဆရာသမားတွေဖြစ်နေလေရဲ့… မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ကတော့…. 1, 2, 9. သင့်တော်တဲ့သူကတော့. 6, 8!!!
အိုး… မင်း ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပဲ မွေးဖွားလာတာပါလား.. မင်းဟာ တခြားလူရဲ့ခံစားချက်ကို ဂရုမစိုက်တက်သူတစ်ဦးပေါ့..ဆိုလိုတာက မင်းဘဝမှာ မင်းဟာ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေချင်တဲ့သူပါ.. မင်းဟာ ပညာရေး..အလုပ်..စီမံခန့်ခွဲမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အောင်မြင်မှုသူတစ်ဦးပါ..
မင်းဟာ ကြင်နာတက်ပါတယ်..(ဒါပေမယ့် မင့်စိတ်ထဲမှာ ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ လူတွေအပေါ်မှာသာ)…..
ရုပ်ရည်အရမ်းချော်မောနေတက်ပြီ.. ဘဝဟာလည်း. ကံကောင်းခြင်းတွေ စုနေတက်ပါတယ်.. ကံကြမ္မာကောင်းတွေဟာ မင်းနဲ့အတူလာတယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်.. မင်းရဲ့စိတ်ထားနဲ့ခန္ဓာဟာ အချစ်ကိစ္စတွေမှာ လှိုင်လှိုင်လှဲလှဲရှိလှပါတယ်..
တခြားနံပါတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံရတက်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်.. မင်းဟာ အမျိုးသားဆိုရင်တော့.. လက်ထက်တဲ့အချိန်အထိ မိန်းကလေးငယ်များနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူတဦးပါ.. အမျိုးသမီးသာဆိုရင်တော့.. စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှု..ဒါမှမဟုတ် လက်ထက်တာကို စောစောစီးစီး ရင်ဆိုင်ရတက်ပါတယ်.. ကြင်နာတက်သူတွေပဲ မင့်ဘဝထဲကို ဝင်လာပါလိမ့်မယ်..
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့.. မင်းဟာ အိမ်ရဲ့ဆည်းလှည်းလေးပါပဲ… စာနာတက်သူ…နှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်သူ.မျှတသူ.. အိမ်ထောင်မှုနိုင်နင်းသူ..ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းမွန်သူတစ်ဦးပါပဲ…ကုန်ကုန်ပြောရရင်.. မင့်ရဲ့အကြင်နာတွေနဲ့..ဒီကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကိုကုစားပေးနိုင်သူတယောက်ပါပဲ…
မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်တွေကတော့.. 1, 6, and 9. သင့်လျော်တဲ့သူတွေကတော့.. 4, 5!!!
မင်းဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိသူ.. ယထာဘူတ ၀ါဒီတယောက်ပါ.. မိမိကိုယ့်ကို ယုံကြည်တက်တယ်..ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတက်ပြီ..ပညာရေးမှာ ထူးချွန်သူ တစ်ဦးပါ.. ဂီတ.အနုပညာ..သီချင်းဆို..သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်တွေမှာလည်း.. ထူးချွန်နိုင်သူပါ..
မင်းရဲ့ပြဿနာကတော့..မင့်ရဲ့ဒေါသစိတ်ပါပဲ.. အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့. အထက်ကအချက်တွေနဲ့ မင်းဟာ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်.. မင်းဟာ..မင့်မိဘအတွက် ဘာမဆို စွန့်လွှ့တ်နိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်..(ဆိုလိုတာက မိသားစုကို အရမ်းတန်းဖိုးထားတက်တာပါ)
အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ မင်းရဲ့အဆင့်အတန်းကလည်း တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်နေမှာပါ.. အမျိုးသားတစ်ဦးသားဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးထုကြားမှာ ရေပန်းစားမယ့်သူပါ..ဘက်စုံထူးချွန်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်နေပါတယ်..
နံပါတ် (၇) သမားအများစုဟာ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ အဆင်မပြေကြတာများပါတယ်.. အနည်းစုလောက်ပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝကို တည်ဆောက်နိုင်ကြတာပါ…. မင်းရဲ့ဘဝမှာ အရာအားလုံးရှိနေပေမယ့်..
အလိုမကျမှုတွေ..စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေ ကလည်း ရှိနေတက်ပြန်ရော့.. ဒါကလည်း..ဘုရားသခင်က မင်းကို အရာအားလုံးမျှတအောင် ပေးထားတဲ့သဘောလို့ထင်ပါတယ်.. မင်းလို ထူးချွန်တဲ့သူ ၁ဝဝလောက်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
မင်းတယောက်လောက်ပဲ အိမ်ထောင်ရေးမသာယာတာမျိုးတွေ့ရတက်ပါတယ်.. ဒါကြောင့်.. ကြင်ဖော်ကို စောင့်စားနေတာထက်.. ကိုယ်နဲ့ လိုက်လျော်ညီထွေမယ့်သူကို စောစောစီးစီး ရှာထားသင့်ပါတယ်…အဲလိုမှ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့..မင်းဟာ ဘဝကို အထီးကျန်စွာ ဖြတ်သန်းသွားရမှာ အသေအချာပါပဲ..ဒါကြောင့်..ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေချာဂရုစိုက်အလေးထားသင့်ပါတယ်..
မင်းဟာ အံဖွယ်ကောင်းသော.ဖော်ရွှေသော.ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့သော ပျော်ပျော်နေတက်တဲ့ လူတယောက်ပါ..မင်းဟာ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ မွေးဖွားလာသူတစ်ဦးပါ.. မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်တွေကတော့.. 2. သင့်တော်တဲ့အဖော်မွန်ကတော့.. 1,4 !!!
မင်းရဲ့ ဘဝဟာ ကြမ်းတမ်းလွန်းပါတယ်. ဘာကြောင့်ဆိုတာ. ဘယ်သူမှ မင်းကို နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. သူတပါးကို အပြစ်ပြောရာမှာ မင်းဟာ တဖက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်လှပါတယ်.. မင်းရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝဟာ ဆင်းရဲ့နုံချာနိုင်ပါတယ်.. အခြေအနေက မပေးဘူးဆိုရင်တော့.. မင့်ရဲ့မိဘတွေကိုတောင် စောစီးစွာ လက်လွှတ်ရနိုင်ပါတယ်.. ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေက
မင့်ဘဝထဲမှာ မကြာခဏဖြစ်နေမယ်အရာတွေပါ.. ဒီပြဿနာတွေကပဲ မင်းရဲ့ပညာရေးကို တားဆီးနေပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမယ့် မင်းဟာ ဘဝကို တခြားနည်းနဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
မင်းဟာ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့သူတစ်ဦးပါ..ဒါပေမယ့် အဲဒီတိုက်ပွဲမှာပဲ ကျဆုံးနိုင်သူလည်း ဖြစ်နေပြန်ရော့. ပုံမှန်အားဖြင့်..မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်ဆံရာမှာ မင်းဟာ တည်ကြည်လေးနက်စွာ နေတက်ပြီ.. ဘဝကိုလည်း..အထီးကျန်စွာ
ဖြတ်သန်းနေရမယ့်သူပါ.. ပြီးတော့ တပါးသူကို ကူညီဖို့အသင့်ရှိနေသူ တစ်ဦးပါ.. မင်း အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါမှာတော့ (အဲဒါကလည်း.. အများအားဖြင့် အလယ်အလတ်အရွယ်မှာပဲ ဖြစ်ပွားတက်ပါတယ်)
မင့်ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုးအနည်းငယ်ဟာ လွင့်ပျောက်သွားသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်..ပြီးတော့ မင်းဟာ လုံခြုံချမ်းမြေ့မှုကို ရရှိပါလိမ့်မယ်.. မင်းဟာ မမျှော်လင့်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်း..ယှဉ်ဆိုင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်.. ဥပမာ..( အမှုအခင်းများ..အဆိပ်ရှိသတ္တဝါများ..မတော်တဆထိခိုက်မှုများနဲံ ကြုံတွေနိုင်ပါတယ်)
သိုပေသိ.. မင်းဟာ စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့သူ..လုံ့လဝီရိယရှိသူ.ရဲရင့်သူ.. ခွန်းအားဗလနဲ့ပြည့်စုံသူ. တစ်ယောက်ပါ.. အဲဒါတွေကပဲ မင်းကို အောင်မြင်မှုဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ..
မင်းဟာ မိသားစုရဲ့ အဓီက အစိတ်အပိုင်းတခုပါ.. အားကိုယ်ရဆုံးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး.. ဖိုက်တာတစ်ဦးလည်းဖြစ်နေပြန်ရော့… မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ကတော့.. 1, 4, and 8. သင့်တော်တဲ့အဖော်မွန်ကတော့ 5!!!
မင်းကတော့ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ သဟဇာတမဖြစ်ဆုံး လူသားတစ်ဦးပေါ့.. မင်းဟာ ရုပ်ပိုင်း..စိတ်ပိုင်း အရမ်းကို ကြံ့ခိုင်လွန်းသူတစ်ဦးပါ.. ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသူတဦးလည်းဖြစ်ပြန်ရော့.. မင်းဟာ အလုပ်ကို အရမ်းကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပြီ.. အောင်မြင်မှုကိုလည်း ခက်ခဲစွာ ရယူရမယ့်သူတစ်ဦးပါ..
သာမန်အားဖြင့်တော့ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မင်းဟာ မိသားစုပြသနာတွေနဲ့ လုံးပန်းနေရတက်ပါတယ်..ပြီးတော့ ဘဝဟာလည်း. ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မင်းအလိုရှိတာကို ရရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ မင်းရဲ့ဘဝ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်.. မင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလေးစားခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်..
စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်ပြီ.. ပြိုင်ဘက်တွေကို အလှဲထိုးနိုင်တဲ့သူ တစ်ဦးပေါ့.. ငယ်ရွယ်စဉ်မှာတော့ မင်းဟာ အရမ်းကို ပေတေမဲ့ ကလေးတယောက်ပါ.. မိဘက မကြာခဏရိုက်နက်ဆုံးမရသူ.. ရန်ခဏခဏ ဖြစ်တက်သူတစ်ဦးပေါ့.. မင့်ဘဝဟာ ဒဏ်ရာအနာတရတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေသလိုပါပဲ.. ဒါပေမယ့်..အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့..
မင်းဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်လာပြီ.. ယောကျာ်းပီသစွာ နေထိုင်ပြန်ရော့.. ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ မင်းအတွက် လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး.. မင်းဟာ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်..ဘဏ်အလုပ်တွေနဲ့ သင့်လျှော်ပါတယ်.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေကို မင့်ကို ယုံကြည့်ကြလို့ပါပဲ..
မင့်ရဲ့မိသားစုဘဝကတော့ အရမ်းကို ကောင်းမွန်လှပါတယ်. ဒါပေမယ့် မင့်ကလေးတွေအတွက်တော့ စိုးရိမ်ရပါလိမ့်မယ်.. မင်းဟာ လူလူချင်းစာနာတက်သူ..စိတ်ရှည်သူ..ပညာဉာဏ်ကြီးမားသူ..နားလည်းခွင့်လွတ်ပေးနိုင်သူတစ်ဦးပါ… မင်းဟာ ရည်မှန်းချက်တွေကို ရယူဖို့.. အဂတိတရားမထားပဲ လူတွေအပေါ် အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ မွေးဖွားလာသူတစ်ဦးပါ…
စှယျတျောရှကျအနုလေးတှထှေကျတဲ့အခြိနျဆို အရှကျနုလေးတှေ ခူးပွီး ဟငျးခြိုခကျြသောကျကွပါတယျ။ စှယျတျောရှကျက ဟငျးခြိုလညျးခကျြသောကျလို့ရသလို အရှကျကိုရနှေေးဖြျောပွီး ကွကျသှနျနီပါးပါးလှီးပွီး ဆီစိမျးလေးနဲ့သုပျစားလို့လညျးအရမျးကောငျးပါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူ ငရုတျကောငျး ပုဇှနျခွောကျထောငျးထားပါ။ စားနိုငျသလောကျရပေမာဏထညျ့ပွီး ဆူပှကျလာသညျအထိတညျပါ။ မြှငျငပိအနညျးငယျနှငျ့ အပျေါမှ ထောငျးထားတာမြားကို ထညျ့ပါ။ ဟငျးအိုးဆူလာရငျ ခြှထေားသော စှယျတျောရှကျမြားကို ထညျ့ပါ။ အရသာမှုနျ့ ခတျပါ။ ဟငျးခြိုအိုး ဆူလာပွီဆို ရပါပွီ။
စှယျတျောရှကျနုမြားကို ဟငျးခြိုခကျြသောကျ၍ လညျကောငျး ၊ ကွျောခကျြပွုလုပျ၍ လညျကောငျး ၊စားသုံးနိုငျသညျ….။
အပူငွိမျးစခွေငျး အိပျပြျောစခွေငျး နှလုံးကို အားရှိစခွေငျး ၊ အကြိုးမြား ရရှိစပေါသညျ….။
စှယျတျောနီသညျ အေးဖနျ၍ ဝမျးမီးကို တောကျစသေညျ…။ ဝမျးကို ခြုပျစတေကျသညျ…။ သလိပျနာ ၊ လနောကို နိုငျ၏…။
အဝါပှငျ့သညျ ဖနျ၏…။ စှယျတျော အငယျမြိုးသညျ တွိဒေါသနာ၊ ဦးခေါငျး၍ ပေါကျသော အနာကို နိုငျ၏။
နို့ရညျကို ပှားစတေကျသညျ…။ စှယျတျောပနျးဖွူကို ပွုတျသောကျပါက ဆီးနညျးခွငျး ၊ အသညျးရောငျ အသားဝါဖွဈခွငျး စသညျ့ရောဂါမြား ပြောကျသညျ…။
ခရမျးရောငျသညျ သှေးအညဈအကွေးကို ပယျစှနျ့၍ မီးယပျသှေးဆုံးပြောကျသညျ…။
အညှနျ့မြားကိုပွုတျသောကျခွငျးဖွငျ့ သှေးပုပျကငျးစငျပွီး အသကျရှညျ ကနျြးမာ စသေညျ…..။
အဆဈရောငျရမျးခွငျး ၊ အဆဈကိုကျခွငျး ဆီအနယျကခြွငျးတို့ကို ပြောကျစသေညျ…။
အမွဈပွုတျရညျကို သောကျသုံးခွငျးဖွငျ့ ဆီးလမျးကွောငျး နာကငျြကိုကျခဲခွငျးကို ပြောကျစသေညျ….။
ရငေတျခွငျးကို ပယျ၍ ထုံကငျြခွငျးကို ကာကှယျနိုငျသညျ….။
စှယျတျောပငျသညျ တဇေောပကျြ၍ အောကျပိုငျး ညောငျးညာကိုကျခဲခွငျးကို သကျသာပြောကျကငျးစသေော တနျဖိုးကွီး မားသညျ့ ဆေးပငျတဈပငျ ဖွဈပါသညျ…။
#crd original uploader
စွယ်တော်ရွက်အနုလေးတွေထွက်တဲ့အချိန်ဆို အရွက်နုလေးတွေ ခူးပြီး ဟင်းချိုချက်သောက်ကြပါတယ်။ စွယ်တော်ရွက်က ဟင်းချိုလည်းချက်သောက်လို့ရသလို အရွက်ကိုရေနွေးဖျော်ပြီး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးပြီး ဆီစိမ်းလေးနဲ့သုပ်စားလို့လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်း ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းထားပါ။ စားနိုင်သလောက်ရေပမာဏထည့်ပြီး ဆူပွက်လာသည်အထိတည်ပါ။ မျှင်ငပိအနည်းငယ်နှင့် အပေါ်မှ ထောင်းထားတာများကို ထည့်ပါ။ ဟင်းအိုးဆူလာရင် ချွေထားသော စွယ်တော်ရွက်များကို ထည့်ပါ။ အရသာမှုန့် ခတ်ပါ။ ဟင်းချိုအိုး ဆူလာပြီဆို ရပါပြီ။
စွယ်တော်ရွက်နုများကို ဟင်းချိုချက်သောက်၍ လည်ကောင်း ၊ ကြော်ချက်ပြုလုပ်၍ လည်ကောင်း ၊စားသုံးနိုင်သည်….။
အပူငြိမ်းစေခြင်း အိပ်ပျော်စေခြင်း နှလုံးကို အားရှိစေခြင်း ၊ အကျိုးများ ရရှိစေပါသည်….။
စွယ်တော်နီသည် အေးဖန်၍ ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်…။ ဝမ်းကို ချုပ်စေတက်သည်…။ သလိပ်နာ ၊ လေနာကို နိုင်၏…။
အဝါပွင့်သည် ဖန်၏…။ စွယ်တော် အငယ်မျိုးသည် တြိဒေါသနာ၊ ဦးခေါင်း၍ ပေါက်သော အနာကို နိုင်၏။
နို့ရည်ကို ပွားစေတက်သည်…။ စွယ်တော်ပန်းဖြူကို ပြုတ်သောက်ပါက ဆီးနည်းခြင်း ၊ အသည်းရောင် အသားဝါဖြစ်ခြင်း စသည့်ရောဂါများ ပျောက်သည်…။
ခရမ်းရောင်သည် သွေးအညစ်အကြေးကို ပယ်စွန့်၍ မီးယပ်သွေးဆုံးပျောက်သည်…။
အညွန့်များကိုပြုတ်သောက်ခြင်းဖြင့် သွေးပုပ်ကင်းစင်ပြီး အသက်ရှည် ကျန်းမာ စေသည်…..။
အဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း ၊ အဆစ်ကိုက်ခြင်း ဆီအနယ်ကျခြင်းတို့ကို ပျောက်စေသည်…။
အမြစ်ပြုတ်ရည်ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ဆီးလမ်းကြောင်း နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်စေသည်….။
ရေငတ်ခြင်းကို ပယ်၍ ထုံကျင်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သည်….။
စွယ်တော်ပင်သည် တေဇောပျက်၍ အောက်ပိုင်း ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသော တန်ဖိုးကြီး မားသည့် ဆေးပင်တစ်ပင် ဖြစ်ပါသည်…။
October 20, 2020 May 24, 2020 by Zaw Hein
ဗောကျသီးမှာ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခပြေးခွငျး၊ ခန်ဓါကိုယျတှငျးကအဆိပျအတောကျတှကေိုပွစေခွေငျး၊ဆီးခြိုဝဒေနာကိုထိနျးညှိပေးနိုငျခွငျး၊ ကြောကျကပျလုပျငနျးဆောငျတာတှကေိုတိုးမွှငျ့ပေးနိုငျခွငျး၊ပွငျးထနျတဲ့ဝဒေနာအခြို့ကနေ ကာကှယျပေးနိုငျခွငျး၊နှလုံးကနျြမာသနျစှမျးမှုကိုတိုးမွှငျ့ပေးခွငျး၊ကိုယျခံအားစနဈကိုကောငျးမှနျစခွေငျးတို့ဖွဈပျေါအောငျလုပျဆောငျပေးနိုငျတဲ့အစှမျးရှိပါတယျ။
ဗောကျသီး ကခြိုခြိုခဉျြခဉျြလေးနဲ့အရသာရှိတာကွောငျ့ အခြိုပှဲတှေ၊ကိတျမုနျ့၊သကွားလုံးတှနေဲ့ မုနျ့တှပွေုလုပျရာမှာထညျ့သှငျးအသုံးပွုကွသလို သရစောအနနေဲ့လညျးဗောကျသီးကို အစိမျးစားတာမြိုးတှရှေိပါတယျ။ဗောကျသီးမှာ ကယျလိုရီပမာဏနညျးပါးပွီး ဗီတာမငျ နဲ့ သတ်တုဓါတျတှလေညျးအတျောအသငျ့ပါဝငျပါတယျ။ဗောကျသီးမှာ ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှကွှေယျဝစှာပါဝငျနပွေီး ကနျြးမာရေးအတှကျအထောကျအကူပွုတဲ့Polyphenols နဲ့ carotenoidတှလေညျးပါဝငျပါတယျ။
ဆီးခြို(Diabetes)-ဗောကျသီးမှာfructose ကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ ဆီးခြိုဝဒေနာသညျတှစေားသုံးဖို့သငျ့တျောပါတယျ။
ရောငျရမျးမှုကိုသကျသာစခွေငျး –ဗောကျသီးမှာpolyphenol နဲ့ ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှကွှေယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ ပနျးနာရငျကပျြသကျသာစတေဲ့ဆေး၊ခြောငျးဆိုးပြောကျဆေး၊ အနာကကျြဆေး၊ သနျကဆြေး၊ရောငျရမျးမှုသကျသာစတေဲ့ဆေး၊ဝမျးပြော့ဆေး၊ဝမျးနုတျဆေးတှထေုတျလုပျရာမှာအသုံးပွုသလို အစာအိမျဝဒေနာတှအေတှကျလညျးအသုံးပွုလို့ရပါတယျ။
သှေးတိုးရောဂါ (Hypertension) ကိုထိနျးညှိ –ဗောကျသီးမှာpolyphenols ၊ carotenoid တို့လိုမြိုး phyto-chemical တှနေဲ့သှေးတိုးတာကိုသကျသာစနေိုငျတဲ့ ပိုတကျဆီယမျဓါတျတှသေငျ့တငျ့မြှတစှာပါဝငျတာကွောငျ့ဗောကျသီးကသှေးတိုးတာကိုထိနျးညှိပေးနိုငျပါတယျ။ ထိုဇီဝဓါတုဒွပျပေါငျးတှကေ ကိုလကျစထရောကိုကဆြငျးစပေါတယျ။
အဆုတျကငျဆာ (Lung Cancer) – မကွာသေးခငျက လုပျဆောငျခဲ့တဲ့လလေ့ာမှုတှအေရဗောကျသီးမှာpolyphenol နဲ့ carotenoidတှပေါဝငျနတောကွောငျ့ အဆုတျကငျဆာကို ကုသမှုမှာ အကြိုးရှိစနေိုငျတယျ၊လို့တှရှေိ့ရပါတယျ။ဗောကျသီးမှာ ကငျဆာဆဲလျတှကေိုတိုကျဖကျြနိုငျတဲ့ အစှမျးသတ်တိရှိတာကွောငျ့ ကငျဆာကုသမှုမှာ အထောကျအကူပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အာရုံကွောပွဿနာတှကေို သကျသာစခွေငျး –ဗောကျသီးမှာfree radicalတှကေိုထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ အစှမျးရှိတာကွောငျ့ အာရုံကွောဆိုငျရာရောဂါတှအေပါအဝငျရောဂါတျောတျောမြားမြားကို ခုခံရာမှာ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
အမွငျအာရုံကောငျးမှနျစခွေငျး –ဗောကျသီးမှာ ဗီတာမငျအေ (Vitamin A) ကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွျောင့နစေ့ဉျလိုအပျနတေဲ့ ဗီတာမငျအေ ပမာဏကိုလုံလောကျစှာထောကျပံ့ပေးပါတယျ။ ဗီတာမငျအေ က မကျြလုံးကိုကနျြးမာစပွေီးရတေိမျဖွဈတာနဲ့ မကျြလုံးကွှကျသားတှပေကျြစီးတာကိုကာကှယျပေးပါတယျ။
အရိုးတှကေိုကွံ့ခိုငျသနျစှမျးစခွေငျး –ဗောကျသီးမှာ အရိုးတှကွေံ့ခိုငျသနျစှမျးဖို့အတှကျလိုအပျတဲ့ကယျလျဆီယမျနဲ့ဖော့စဖရိတျတှေ စုပျယူမှုကို အထောကျအပံ့ပေးတဲ့pectin ပါရှိပါတယျ။ဗောကျသီးက အမြိုးသားတှမှောဖွဈတတျတဲ့ ဒူလာနဲ့ အရပွေားနီမွနျးရောငျရမျးတာကိုကုသရာမှာလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ကိုယျခံစနဈကိုတိုးမွှငျ့ပေးနိုငျခွငျး –ဗောကျသီးမှာ ဗီတာမငျ စီ (Vitamin C) ပါဝငျတာကွောငျ့ ခန်ဓါကိုယျကလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျ စီ ကိုပွညျ့ဝစပေါတယျ။ ဗီတာမငျ စီက ကိုယျခံအားစနဈကို တိုးမွှငျ့ပေးပါတယျ။
အသညျးကနျြးမာစခွေငျး –ဗောကျသီးက ခန်ဓါကိုယျတှငျးက ကိုလကျစထရောပမာဏကိုထိနျးညှိပေးပွီး အသညျးကနျြးမာရေးကိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။
နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ (Atherosclerosis) –ဗောကျသီးဖြျောရညျမှာ နှလုံးရဲ့ လုပျဆောငျမှုတှကေိုကောငျးမှနျစဖေို့အတှကျ အထောကျအကူပွုတဲ့ အရေးပါတဲ့phyto-chemical အခြို့ပါဝငျပါတယျ။
အအေးမိ၊ တုပျကှေးတှကေို သကျသာစခွေငျး – ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှကွှေယျဝစှာပါဝငျတဲ့ဗောကျသီးက အအေးမိတုပျကှေးဖြားနာမှုတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ဗောကျသီးကို တဈနနှေ့ဈကွိမျရနှေေးနဲ့စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ နှာခေါငျးပိတျတာကိုသကျသာစမှောဖွဈပွီးနလေို့သကျသာလာစမှောဖွဈပါတယျ။
ကြောကျကပျကိုကနျြးမာရေးကောငျးမှနျစခွေငျး –ဗောကျသီးက ကိုယျတှငျးက အဆိပျအတောကျတှကေိုဖယျရှားပေးပွီး ဆီးရှငျစတောကွောငျ့ ခန်ဓါကိုယျထဲက ပိုလြှံနတေဲ့ အဆီတှေ၊အငနျဓါတျတှနေဲ့ပွနျရညျကွောစနဈထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားစှနျ့ထုတျပေးတာကွောငျ့ကြောကျကပျကိုကနျြးမာစပေါတယျ။
ဘကျတီးရီးယားတှကေိုသစေနေိုငျစခွေငျး –ဗောကျသီးမှာပါတဲ့ ဓါတျတှကေ ခန်ဓါကိုယျအတှကျအကြိုးပွုတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှကေိုရော အကြိုးမပွုတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှကေိုပါသစေနေိုငျတဲ့ အစှမျးရှိပါတယျ။ဗောကျသီးကE. Coli ဘကျတီးရီးယားအပါအဝငျ ဘကျတီးရီးယားတျောတျောမြားမြားကိုသစေနေိုငျပါတယျ။
ဗီတာမငျ စီ ကွှယျဝခွငျး –ဗောကျသီးမှာ သံပုရာသီးထကျ ဗီတာမငျ စီ ၂ ဆလောကျပါဝငျပါတယျ။ ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးကွှယျဝတာကွောငျ့ဗောကျသီးစားသုံးပေးတာက နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာရောဂါ၊လဖွေတျခွငျး( Strokes)၊ ကငျဆာရောဂါတှေ မဖွဈအောငျကာကှယျပေးပါတယျ။
Pectin ပါဝငျခွငျး –ဗောကျသီးမှာအစာခအြေူလမျးကွောငျးရဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေို အဆငျပွခြေောမှစေ့ပွေီး ဝမျးမခြုပျအောငျကာကှယျပေးတဲ့ပြျောဝငျလှယျတဲ့အမြှငျဓါတျကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။
မမှညျ့သေးတဲ့ဗောကျသီးမှာ ဓါတျမတညျ့မှုကိုဖွဈစနေိုငျတဲ့ အဆိပျရှိတဲ့alkaloid အနညျးငယျပါဝငျနတောကွောငျ့ဗောကျသီးကိုမမှညျ့ဘဲမစားသုံးသငျ့ပါဘူး။
ခယျြရီသီးမြိုးရငျးဝငျ၊ ဘယျရီသီးမြိုးရငျးဝငျအသီးတှအေပငျတှနေဲ့ ဓါတျမတညျ့သူတှအေနနေဲ့ဗောကျသီးမစားသုံးသငျ့ပါဘူး။
ဗီတာမငျ စီ၊ ဗီတာမငျ အို တို့နဲ့ ဓါတျမတညျ့သူတှအေနနေဲ့လညျးဗောကျသီးကိုလုံးဝမစားသုံးသငျ့ပါဘူး။
ဗောက်သီးမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပေးခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်တွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေကိုပြေစေခြင်း၊ဆီးချိုဝေဒနာကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း၊ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာအချို့ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း၊နှလုံးကျန်မာသန်စွမ်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။
ဗောက်သီး ကချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးနဲ့အရသာရှိတာကြောင့် အချိုပွဲတွေ၊ကိတ်မုန့်၊သကြားလုံးတွေနဲ့ မုန့်တွေပြုလုပ်ရာမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသလို သရေစာအနေနဲ့လည်းဗောက်သီးကို အစိမ်းစားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဗောက်သီးမှာ ကယ်လိုရီပမာဏနည်းပါးပြီး ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေလည်းအတော်အသင့်ပါဝင်ပါတယ်။ဗောက်သီးမှာ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့Polyphenols နဲ့ carotenoidတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ဆီးချို(Diabetes)-ဗောက်သီးမှာfructose ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေစားသုံးဖို့သင့်တော်ပါတယ်။
ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေခြင်း –ဗောက်သီးမှာpolyphenol နဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်သက်သာစေတဲ့ဆေး၊ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ အနာကျက်ဆေး၊ သန်ကျဆေး၊ရောင်ရမ်းမှုသက်သာစေတဲ့ဆေး၊ဝမ်းပျော့ဆေး၊ဝမ်းနုတ်ဆေးတွေထုတ်လုပ်ရာမှာအသုံးပြုသလို အစာအိမ်ဝေဒနာတွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါ (Hypertension) ကိုထိန်းညှိ –ဗောက်သီးမှာpolyphenols ၊ carotenoid တို့လိုမျိုး phyto-chemical တွေနဲ့သွေးတိုးတာကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်တွေသင့်တင့်မျှတစွာပါဝင်တာကြောင့်ဗောက်သီးကသွေးတိုးတာကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုဇီဝဓါတုဒြပ်ပေါင်းတွေက ကိုလက်စထရောကိုကျဆင်းစေပါတယ်။
အဆုတ်ကင်ဆာ (Lung Cancer) – မကြာသေးခင်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတွေအရဗောက်သီးမှာpolyphenol နဲ့ carotenoidတွေပါဝင်နေတာကြောင့် အဆုတ်ကင်ဆာကို ကုသမှုမှာ အကျိုးရှိစေနိုင်တယ်၊လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဗောက်သီးမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတာကြောင့် ကင်ဆာကုသမှုမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အာရုံကြောပြဿနာတွေကို သက်သာစေခြင်း –ဗောက်သီးမှာfree radicalတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတာကြောင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေအပါအဝင်ရောဂါတော်တော်များများကို ခုခံရာမှာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
အမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေခြင်း –ဗောက်သီးမှာ ဗီတာမင်အေ (Vitamin A) ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြော်င့နေ့စဉ်လိုအပ်နေတဲ့ ဗီတာမင်အေ ပမာဏကိုလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ က မျက်လုံးကိုကျန်းမာစေပြီးရေတိမ်ဖြစ်တာနဲ့ မျက်လုံးကြွက်သားတွေပျက်စီးတာကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အရိုးတွေကိုကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေခြင်း –ဗောက်သီးမှာ အရိုးတွေကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဖော့စဖရိတ်တွေ စုပ်ယူမှုကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့pectin ပါရှိပါတယ်။ဗောက်သီးက အမျိုးသားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ဒူလာနဲ့ အရေပြားနီမြန်းရောင်ရမ်းတာကိုကုသရာမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း –ဗောက်သီးမှာ ဗီတာမင် စီ (Vitamin C) ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် စီ ကိုပြည့်ဝစေပါတယ်။ ဗီတာမင် စီက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
အသည်းကျန်းမာစေခြင်း –ဗောက်သီးက ခန္ဓါကိုယ်တွင်းက ကိုလက်စထရောပမာဏကိုထိန်းညှိပေးပြီး အသည်းကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (Atherosclerosis) –ဗောက်သီးဖျော်ရည်မှာ နှလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ အရေးပါတဲ့phyto-chemical အချို့ပါဝင်ပါတယ်။
အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးတွေကို သက်သာစေခြင်း – ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ဗောက်သီးက အအေးမိတုပ်ကွေးဖျားနာမှုတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဗောက်သီးကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ရေနွေးနဲ့စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းပိတ်တာကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပြီးနေလို့သက်သာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ကိုကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေခြင်း –ဗောက်သီးက ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး ဆီးရွှင်စေတာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ထဲက ပိုလျှံနေတဲ့ အဆီတွေ၊အငန်ဓါတ်တွေနဲ့ပြန်ရည်ကြောစနစ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားစွန့်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ကျောက်ကပ်ကိုကျန်းမာစေပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသေစေနိုင်စေခြင်း –ဗောက်သီးမှာပါတဲ့ ဓါတ်တွေက ခန္ဓါကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုရော အကျိုးမပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုပါသေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ဗောက်သီးကE. Coli ဘက်တီးရီးယားအပါအဝင် ဘက်တီးရီးယားတော်တော်များများကိုသေစေနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝခြင်း –ဗောက်သီးမှာ သံပုရာသီးထက် ဗီတာမင် စီ ၂ ဆလောက်ပါဝင်ပါတယ်။ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကြွယ်ဝတာကြောင့်ဗောက်သီးစားသုံးပေးတာက နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊လေဖြတ်ခြင်း( Strokes)၊ ကင်ဆာရောဂါတွေ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Pectin ပါဝင်ခြင်း –ဗောက်သီးမှာအစာချေအူလမ်းကြောင်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေပြီး ဝမ်းမချုပ်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ပျော်ဝင်လွယ်တဲ့အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
မမှည့်သေးတဲ့ဗောက်သီးမှာ ဓါတ်မတည့်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့alkaloid အနည်းငယ်ပါဝင်နေတာကြောင့်ဗောက်သီးကိုမမှည့်ဘဲမစားသုံးသင့်ပါဘူး။
ချယ်ရီသီးမျိုးရင်းဝင်၊ ဘယ်ရီသီးမျိုးရင်းဝင်အသီးတွေအပင်တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်သူတွေအနေနဲ့ဗောက်သီးမစားသုံးသင့်ပါဘူး။
ဗီတာမင် စီ၊ ဗီတာမင် အို တို့နဲ့ ဓါတ်မတည့်သူတွေအနေနဲ့လည်းဗောက်သီးကိုလုံးဝမစားသုံးသင့်ပါဘူး။
အရိုးကြိုးဖူးလြှငျ … မွနျမာ့ဆေးနညျးလေးမြား
လကျတှေေ ပြာကျခဲ့ လို့မြှဝပေါသညျ။
အရိုးကြိုးအရိုးဆကျ ဒဏျနာအရှငျးပြော ကျထုံကဉျြကိုကျ ခဲေ ပြာကျ ပှဲတှဆေ့ေးနညျးကုသိုလျဖွဈမြှဝလေိုကျသညျ
ဤဆေးနညျးသညျ အရိုးတခါ နှဈခါကြိုးထားသ ညျ့ သူမြားပငျ လကျတှပြေ့ောကျကငျး၍ အလုပျကွမျးမြားပငျ လုပျဆောငျနိုငျနကွေပွီဖွဈသညျ
ထိုကွောငျ့ ယုံယုံကွညျကွညျဖွငျ့အညှနျး အတိုငျးပွုလုပျပါလေ….
မိသ၁လငျဥအစိမျး, နနှငျးစိမျး,ပဉျြးတျောသိမျရှကျ, မာလာ ဥစိမျး, သကျရငျးကွီးရှကျ, နဘူးဆီးမခမျး,ထမငျးဖွူ, (ဝကျဆီနှငျ့မလှရှကျ,ထညျ့လညျးရ မထညျ့လညျးရသညျ) ,
ပါဝငျပစ်စညျးမြားကိုအနညျးငယျစီညကျအောငျထောငျး၍ အဝတျသနျ့သနျ့ဖွ ငျ့ထညျ့ပီး အနညျးငယျနှေးနအေောငျ မီးပွ၍(မီး မပွလို့ရငျ ရနှေေး အိတျကပျ၍) နှေးလာလြှငျ ဖွဈပှား သညျ့နရောပျေါသို့အုံပွီး ကပျြစညျးပေးရပါသညျ။
၁ရကျ၂ရကျ အုံထားသညျ့ဆေးမြားခွောကျရငျ ထိုနညျးအတိုငျးထပျ၍ အုံ ကပျြစညျးပေးပါ ပြောကျကငျးသညျ အထိစိတျရှညျလကျရှညျပွုလုပျပါ ပြောကျကငျးပါသညျ။
နနှငျးနှငျ့ အနာစိုဓာတျမတညျ့လြှငျနနှငျးမထညျ့ပါနှငျ့, စိတျမရှ ညျလြှငျမပြောကျပါ, ကပျြစညျးကာလမှာ ငွိမျသကျစှာနဖေို့လိုအပျသညျ့အတှကျပွငျးထနျစှာ လှုပျရှားမှုမြားမပွုလုပျပါနှငျ့,ညျောရှောငျဖို့လိုအပျသညျ,
ကပျြပျေါသို့ ရနှေေးအိတျလေးဖွငျ့အနညျးငယျနှေးအော ငျလုပျဖို့လိုအပျသညျမနျးဆေး သောကျဖို့လိုအပျသညျ
စိုငျး မငျး သနျ့
လက်တွေေ ပျာက်ခဲ့ လို့မျှဝေပါသည်။
အရိုးကျိုးအရိုးဆက် ဒဏ်နာအရှင်းပျော က်ထုံကျဉ်ကိုက် ခဲေ ပျာက် ပွဲတွေ့ဆေးနည်းကုသိုလ်ဖြစ်မျှဝေလိုက်သည်
ဤဆေးနည်းသည် အရိုးတခါ နှစ်ခါကျိုးထားသ ည့် သူများပင် လက်တွေ့ပျောက်ကင်း၍ အလုပ်ကြမ်းများပင် လုပ်ဆောင်နိုင်နေကြပြီဖြစ်သည်
ထိုကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်အညွှန်း အတိုင်းပြုလုပ်ပါလေ….
မိသ၁လင်ဥအစိမ်း, နနွင်းစိမ်း,ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်, မာလာ ဥစိမ်း, သက်ရင်းကြီးရွက်, နဘူးဆီးမခမ်း,ထမင်းဖြူ, (ဝက်ဆီနှင့်မလွှရွက်,ထည့်လည်းရ မထည့်လည်းရသည်) ,
ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအနည်းငယ်စီညက်အောင်ထောင်း၍ အဝတ်သန့်သန့်ဖြ င့်ထည့်ပီး အနည်းငယ်နွေးနေအောင် မီးပြ၍(မီး မပြလို့ရင် ရေနွေး အိတ်ကပ်၍) နွေးလာလျှင် ဖြစ်ပွား သည့်နေရာပေါ်သို့ အုံပြီး ကျပ်စည်းပေးရပါသည်။
၁ရက်၂ရက် အုံထားသည့်ဆေးများခြောက်ရင် ထိုနည်းအတိုင်းထပ်၍ အုံ ကျပ်စည်းပေးပါ ပျောက်ကင်းသည် အထိစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြုလုပ်ပါ ပျောက်ကင်းပါသည်။
နနွင်းနှင့် အနာစိုဓာတ်မတည့်လျှင်နနွင်းမထည့်ပါနှင့်, စိတ်မရှ ည်လျှင်မပျောက်ပါ, ကျပ်စည်းကာလမှာ ငြိမ်သက်စွာနေဖို့လိုအပ်သည့်အတွက်ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ရှားမှုများမပြုလုပ်ပါနှင့်,ညော်ရှောင်ဖို့လိုအပ်သည်,
ကျပ်ပေါ်သို့ ရေနွေးအိတ်လေးဖြင့်အနည်းငယ်နွေးအော င်လုပ်ဖို့လိုအပ်သည်မန်းဆေး သောက်ဖို့လိုအပ်သည်
စိုင်း မင်း သန့်
မွနျမာမှတျပုံတငျ ရှိတဲ့အခွခေံလူတနျးစားမြားကို အမစေုအစိုးရက WAVEဖွငျ့ ငှကွေေးထောကျပံ့တော့မညျ..
အခွခေံလူတနျးစားမြားအတှကျ အစိုးရ၏ ဒုတိယအကွိမျ ထောကျပံ့မညျ့အစီအစဉျကို လာမညျ့ သီတငျးပတျသုံးပတျခနျ့အတှငျး ပေးအပျရနျ စီစဉျနကွေောငျး နိုငျငံတျောသမ်မတရုံးပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ဦးဇျောဌေးက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ယခုအကွောငျးကိုတော့ သမ်မတအိမျတျော သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲကို မလေ ၁၆ ရကျ တှငျ အှနျလိုငျးမှ တဈဆငျ့ပွုလုပျခြိနျက ဒီ အစီအစဉျကိုကွညောခွငျးဖွဈပွီး ပထမအကွိမျကဲ့သို့ အခွခေံ လူတနျးစားမြားကို စားသောကျကုနျ ငါးမြိုး ပေးအပျမညျမဟုတျဘဲ ငှသေားကပျြငှေ ပေးအပျမညျဟုဆိုပါတယျ။
ဒီလိုငှကွေေးထောကျပံ့တဲ့အခါမှာလညျး Online Payment (အှနျလိုငျးငှပေေးခခြွေငျး) နဲ့။ ဥပမာအားဖွငျ့ Wave Money တို့၊ KBZ Pay တို့ စသညျဖွငျ့ပေါ့နျော နိုငျငံသားတိုငျး လကျထဲရောကျအောငျ ထောကျပံ့ပေးသှားမယျလို့ဆိုပါတယျ
သွင်ျကနျ ရုံးပိတျရကျရှညျကာလအတှငျး ပုံမှနျဝငျငှမေရှိသော အခွခေံလူတနျးစားမြားအတှကျ အိမျထောငျတဈစုလြှငျ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ကွကျသှနျ ပစ်စညျးငါးမြိုးကို ပေးအပျခဲ့ရာ တဈနိုငျငံလုံးရှိ အိမျထောငျစု ပေါငျး ၃ ဒသမ ၉၉ သနျးကို ဝငှေ နိုငျခဲ့ပွီး နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာငှထေဲမှ ကပျြ ၅၀ ဒသမ ၈၄၄ ဘီလီယံ ကခြံခဲ့သညျ။
အထကျပါ အခွခေံရိက်ခာ ပေးဝသေညျ့ အစီအစဉျတှငျ အ ငွငျးပှားမှုမြား၊ အထဈအငေါ့မြား နှငျ့ ပစ်စညျးအဖွတျခံရမှုမြားရှိသ ဖွငျ့ ဒုတိယအကွိမျပေးအပျမညျ့ အစီအစဉျတှငျ ငှသေားကိုသာ သကျဆိုငျရာ အိမျထောငျစုဆီသို့ ပေးအပျရနျ စီစဉျရခွငျးဖွဈ ကွောငျး သမ်မတရုံးပွောခှငျ့ရ ပုဂ်ဂိုလျက ရှငျးပွပါတယျ။
အခွခေံလူတနျးစားမြားကို စားသောကျကုနျငါးမြိုး ထောကျပံ့ ရာတှငျ တဈအိမျထောငျလြှငျ ကပျြ ၁၂,၀၀၀ မှ ကပျြ ၂၀,၀၀၀ အတှငျး နရောဒသေအလိုကျ ကုနျကပြွီး ယခု ဒုတိယအကွိမျ တှငျ ယခငျထကျ နှဈဆ ကပျြ ၃၀,၀၀၀ မှ ကပျြ ၄၀,၀၀၀ အကွားထောကျပံ့ရနျ စီစဉျထား ကာ ယငျးအတှကျ ကပျြဘီလီယံ ၁၀၀ ကြျော သုံးစှဲမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အစိုးရ၏ ဒုတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့မည့်အစီအစဉ်ကို လာမည့် သီတင်းပတ်သုံးပတ်ခန့်အတွင်း ပေးအပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ယခုအကြောင်းကိုတော့ သမ္မတအိမ်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မေလ ၁၆ ရက် တွင် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်ပြုလုပ်ချိန်က ဒီ အစီအစဉ်ကိုကြေညာခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်ကဲ့သို့ အခြေခံ လူတန်းစားများကို စားသောက်ကုန် ငါးမျိုး ပေးအပ်မည်မဟုတ်ဘဲ ငွေသားကျပ်ငွေ ပေးအပ်မည်ဟုဆိုပါတယ်။
ဒီလိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာလည်း Online Payment (အွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်း) နဲ့။ ဥပမာအားဖြင့် Wave Money တို့၊ KBZ Pay တို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် နိုင်ငံသားတိုင်း လက်ထဲရောက်အောင် ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်
သြင်္ကန် ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်တစ်စုလျှင် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ကြက်သွန် ပစ္စည်းငါးမျိုးကို ပေးအပ်ခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၃ ဒသမ ၉၉ သန်းကို ဝေငှ နိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေထဲမှ ကျပ် ၅၀ ဒသမ ၈၄၄ ဘီလီယံ ကျခံခဲ့သည်။
အထက်ပါ အခြေခံရိက္ခာ ပေးဝေသည့် အစီအစဉ်တွင် အ ငြင်းပွားမှုများ၊ အထစ်အငေါ့များ နှင့် ပစ္စည်းအဖြတ်ခံရမှုများရှိသ ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်ပေးအပ်မည့် အစီအစဉ်တွင် ငွေသားကိုသာ သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ထောင်စုဆီသို့ ပေးအပ်ရန် စီစဉ်ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ရှင်းပြပါတယ်။
အခြေခံလူတန်းစားများကို စားသောက်ကုန်ငါးမျိုး ထောက်ပံ့ ရာတွင် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ကျပ် ၁၂,၀၀၀ မှ ကျပ် ၂၀,၀၀၀ အတွင်း နေရာဒေသအလိုက် ကုန်ကျပြီး ယခု ဒုတိယအကြိမ် တွင် ယခင်ထက် နှစ်ဆ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ မှ ကျပ် ၄၀,၀၀၀ အကြားထောက်ပံ့ရန် စီစဉ်ထား ကာ ယင်းအတွက် ကျပ်ဘီလီယံ ၁၀၀ ကျော် သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ကြောငျးတှေ ဘယျအတနျးကစပွီး ပွနျဖှငျ့မဲ့အပျေါ အမစေု ပွောကွားလိုကျပွီ …
အခွခေံပညာကြောငျး မြား ပွနျဖှငျ့လြှငျ မူလတနျးအဆငျ့ မှစဖှငျ့ရနျ ဆုံးဖွတျထားသျော လညျး ဆရာကိုယျစားလှယျနှငျ့ ကြောငျးသားမိဘ ကိုယျစားလှယျ တို့၏ အကွံပွုခကျြကွောငျ့ အ ထကျတနျးအဆငျ့မှ စဖှငျ့ရနျ စဉျး စားမညျဟု နိုငျငံတျော၏အတိုငျ ပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစု ကွညျက ပွောသညျ။
အခွခေံပညာကြောငျးမြား ပွနျလညျဖှငျ့လှဈရနျ စီမံခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး နိုငျငံတျော၏အတိုငျ ပငျခံပုဂ်ဂိုလျက အခွခေံပညာဦးစီး ဌာန ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးကို လေးဝငျး၊ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ဆရာ၊ ဆရာမမြားအဖှဲ့ခြုပျကိုယျ စားလှယျ မူလတနျးပွဆရာမ ဒျေါနီလာဝငျး၊ ကြောငျးသားမိဘ ဦးကြျောဌေးတို့နှငျ့ မလေ ၁၉ရကျ က အှနျလိုငျးဆှေးနှေးပှဲပွုလုပျခဲ့ သညျ။
အခွခေံပညာကြောငျးမြား ကို ကွာကွာပိတျထားရနျ မဖွဈ နိုငျ၍ ကြောငျးပွနျဖှငျ့ရနျ အစိုးရ ကစီစဉျနပွေီး အစောဆုံး ဇူလိုငျ လဆနျးတှငျ ပွနျဖှငျ့နိုငျမညျဖွဈ ကွောငျး၊ အှနျလိုငျးသငျကွားမှု သညျ လကျတှသေ့ငျရခွငျးနှငျ့အ ကြိုးရ
လဒျကှာခွားခွငျးကို နိုငျငံ တကာတှငျလညျး ရငျဆိုငျနရေပွီး မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့လညျး အှနျ လိုငျးသငျကွားမှုကို ပွညျ့စုံအောငျ လုပျပေးနိုငျသညျ့ အနအေထား မရှိသေး၍ ကြောငျးပွနျဖှငျ့ရမညျ ဖွဈကွောငျး ဒျေါအောငျဆနျးစု ကွညျကဆိုသညျ။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျမှ မူလ တနျးပွဆရာမ ဒျေါနီလာဝငျးက ကြောငျးပွနျဖှငျ့ရာတှငျ မူလတနျး မှစဖှငျ့မညျဆိုပါက ကလေးငယျ မြား၏ ဆော့ကစားတတျသညျ့ သဘာဝအရ တဈဦးနှငျ့တဈဦး ခပျခှာခှာနထေိုငျစရေနျ မလှယျ ကူဘဲ ၎င်းငျးတို့ကိုကနျြးမာရေးအသိ ပညာပေးရနျ အခကျအခဲရှိ ကွောငျးတငျပွခဲ့သညျ။
‘‘ကလေးတှကေို စညျးကမျး တှနေဲ့ Mask တှေ အုပျခိုငျးမယျ၊ မကျြနှာကာတှေ တပျခိုငျးမယျ။ ခပျခှာခှာ အနအေထားတှနေဲ့ထား မယျ။ ကိုယျ့ဘကျကတော့ တတျ နိုငျသ မြှ ပွငျဆငျထားတဲ့အတှကျ ရပွီဆိုပါစို့။ ကလေးတှကေ ငွိမျ ငွိမျမနတေတျတဲ့ အရှယျလေး တှဖွေဈနတော။
စညျးကမျးလိုကျ နာဖို့ဆိုတာ ဒါပွောတယျ၊ ဒီနား ထိုငျပါ၊ ဒီဟာကို တပျထားပါဆို တာကိုဘယျလိုမှမရတာ။ ကြှနျမ တို့ မန်တလေးရာသီဥတုနဲ့ဆိုရငျ နေ့ လယျလောကျဆို ကလေးတှကေ အင်ျကြီတှခြှေတျပွီး ပဈပေါကျပွီး ကစားတာမြိုး’’ဟု ဒျေါနီလာဝငျး ကဆိုသညျ။
အလယျတနျးနှငျ့ အထကျ တနျး ကြောငျးသားမြားသညျ အ သကျအရှယျအရ အသိပညာရ ထားပွီးဖွဈသကဲ့သို့ ကနျြးမာရေး အသိကိုလညျး ဆရာ၊ ဆရာမမြား ညှနျကွားသညျ့အတိုငျး လိုကျနာ ရနျ မူလတနျးကြောငျးသားမြား ထကျ ပိုမိုအဆငျပွခွေငျး၊
ကြောငျးသားဦးရသေညျလညျး မူလတနျးထကျ နညျးခွငျးကွောငျ့ ကြောငျးပွနျဖှငျ့ပါက အထကျ တနျးအဆငျ့ကို စတငျဖှငျ့လှဈ လြှငျ ပိုမိုထိရောကျမညျဟု ယူဆ ကွောငျး ဒျေါနီလာဝငျးကပွော ကွားသညျ။
အထကျတနျး၊ အလယျတနျး အဆငျ့အတနျးမြား ဖှငျ့လှဈခြိနျ တှငျ မူလတနျးပွဆရာ၊ ဆရာမ မြားက ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူ မြားအား ကိုယျအပူခြိနျတိုငျးခွငျးမှ စကာ အခွားလိုအပျသညျ့ကနျြး မာရေးစောငျ့ရှောကျမှုမြားတှငျ ပူး ပေါငျးအားဖွညျ့ပေးပါက ပိုမို ထိရောကျမညျဟုလညျး ၎င်းငျးကအ ကွံပွုခဲ့ သညျ။
အသကျငယျသညျ့ ကလေး မြားကို မိဘမြားကပိုစိုးရိမျ၍ မူလ တနျးအဆငျ့ထကျ အထကျတနျး အဆငျ့အတနျးမြားကို စဖှငျ့ရနျ ပိုမိုလိုလားကွောငျး ကြောငျးသား မိဘကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောဌေး ကလညျးပွောကွားသညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျက အခွခေံပညာကြောငျး မြားကို အစောဆုံးဇူလိုငျလဆနျး မှ ပွနျဖှငျ့မညျဖွဈရာ ကနျြနသေေး သညျ့ အခြိနျတဈလခှဲအတှငျးတငျ ပွခကျြမြားကို ပွနျလညျသုံးသပျ မညျဖွဈကွောငျး၊ အခွားနိုငျငံမြား ထံမှ သငျခနျးစာမြားကို
လညျး အ မွဲ လလေ့ာသငျယူနမေညျဖွဈ ကွောငျး၊ မူလတနျးမှစဖှငျ့မညျ့ အစား အထကျတနျးမှစဖှငျ့ရနျ လညျး လေးလေးနကျနကျ ပွနျ လညျ စဉျးစားမညျဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
အခွခေံပညာ ကြောငျးသား ကြောငျးသူတှေ …
‘‘အထကျတနျးကလေးတှေ က အရအေတှကျအားဖွငျ့ မူလ တနျးကလေးတှထေကျ ပိုပွီးနညျး လိမျ့မယျထငျတယျ။ Social Distancing လုပျဖို့ ပိုပွီးလှယျလိမျ့ မယျထငျတယျ။ နညျးတဲ့အခါကြ တော့ ပိုပွီးတော့ခှာခှာထားလို့ရ မယျ။
ကြောငျးခြိနျတှေ အပွောငျး အလဲလုပျတာကလညျး နညျး နညျးပိုကွီးတဲ့ ကလေးတှနေဲ့ဆို ပိုအဆငျပွမေယျထငျတယျ။ အဲဒါ တှေ အားလုံးထညျ့စဉျးစားမှာပါ’’ ဟု ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကဆို သညျ။
ထို့အပွငျ ဆရာ၊ ဆရာမ မြားအနဖွေငျ့လညျး မူလတနျး ကလေးမြားအား စညျးကမျးထိနျး သိမျးခွငျးကိုကစားသညျ့ ပုံစံဖွဈ စမေညျ့နညျးလမျးမြား စဉျးစား သငျ့ကွောငျး၊
ကြောငျးတှငျ Social Distancing ဖွဈစမေညျ့ ကစားသညျ့ နညျးလမျးမြိုးသုံးကာ သငျကွားပေးရနျ စဉျးစားစလေို ကွောငျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ က ပွောသညျ။
အခြေခံပညာကျောင်း များ ပြန်ဖွင့်လျှင် မူလတန်းအဆင့် မှစဖွင့်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော် လည်း ဆရာကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကျောင်းသားမိဘ ကိုယ်စားလှယ် တို့၏ အကြံပြုချက်ကြောင့် အ ထက်တန်းအဆင့်မှ စဖွင့်ရန် စဉ်း စားမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က ပြောသည်။
အခြေခံပညာကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီမံခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အခြေခံပညာဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကို လေးဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ် စားလှယ် မူလတန်းပြဆရာမ ဒေါ်နီလာဝင်း၊ ကျောင်းသားမိဘ ဦးကျော်ဌေးတို့နှင့် မေလ ၁၉ရက် က အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ သည်။
အခြေခံပညာကျောင်းများ ကို ကြာကြာပိတ်ထားရန် မဖြစ် နိုင်၍ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရန် အစိုးရ ကစီစဉ်နေပြီး အစောဆုံး ဇူလိုင် လဆန်းတွင် ပြန်ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ အွန်လိုင်းသင်ကြားမှု သည် လက်တွေ့သင်ရခြင်းနှင့်အ ကျိုးရ
လဒ်ကွာခြားခြင်းကို နိုင်ငံ တကာတွင်လည်း ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း အွန် လိုင်းသင်ကြားမှုကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးနိုင်သည့် အနေအထား မရှိသေး၍ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကဆိုသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မှ မူလ တန်းပြဆရာမ ဒေါ်နီလာဝင်းက ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရာတွင် မူလတန်း မှစဖွင့်မည်ဆိုပါက ကလေးငယ် များ၏ ဆော့ကစားတတ်သည့် သဘာဝအရ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေထိုင်စေရန် မလွယ် ကူဘဲ ၎င်းတို့ကိုကျန်းမာရေးအသိ ပညာပေးရန် အခက်အခဲရှိ ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။
‘‘ကလေးတွေကို စည်းကမ်း တွေနဲ့ Mask တွေ အုပ်ခိုင်းမယ်၊ မျက်နှာကာတွေ တပ်ခိုင်းမယ်။ ခပ်ခွာခွာ အနေအထားတွေနဲ့ထား မယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ တတ် နိုင်သ မျှ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ရပြီဆိုပါစို့။ ကလေးတွေက ငြိမ် ငြိမ်မနေတတ်တဲ့ အရွယ်လေး တွေဖြစ်နေတာ။
စည်းကမ်းလိုက် နာဖို့ဆိုတာ ဒါပြောတယ်၊ ဒီနား ထိုင်ပါ၊ ဒီဟာကို တပ်ထားပါဆို တာကိုဘယ်လိုမှမရတာ။ ကျွန်မ တို့ မန္တလေးရာသီဥတုနဲ့ဆိုရင် နေ့ လယ်လောက်ဆို ကလေးတွေက အင်္ကျီတွေချွတ်ပြီး ပစ်ပေါက်ပြီး ကစားတာမျိုး’’ဟု ဒေါ်နီလာဝင်း ကဆိုသည်။
အလယ်တန်းနှင့် အထက် တန်း ကျောင်းသားများသည် အ သက်အရွယ်အရ အသိပညာရ ထားပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ ကျန်းမာရေး အသိကိုလည်း ဆရာ၊ ဆရာမများ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုက်နာ ရန် မူလတန်းကျောင်းသားများ ထက် ပိုမိုအဆင်ပြေခြင်း၊
ကျောင်းသားဦးရေသည်လည်း မူလတန်းထက် နည်းခြင်းကြောင့် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပါက အထက် တန်းအဆင့်ကို စတင်ဖွင့်လှစ် လျှင် ပိုမိုထိရောက်မည်ဟု ယူဆ ကြောင်း ဒေါ်နီလာဝင်းကပြော ကြားသည်။
အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း အဆင့်အတန်းများ ဖွင့်လှစ်ချိန် တွင် မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ များက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအား ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းခြင်းမှ စကာ အခြားလိုအပ်သည့်ကျန်း မာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် ပူး ပေါင်းအားဖြည့်ပေးပါက ပိုမို ထိရောက်မည်ဟုလည်း ၎င်းကအ ကြံပြုခဲ့ သည်။
အသက်ငယ်သည့် ကလေး များကို မိဘများကပိုစိုးရိမ်၍ မူလ တန်းအဆင့်ထက် အထက်တန်း အဆင့်အတန်းများကို စဖွင့်ရန် ပိုမိုလိုလားကြောင်း ကျောင်းသား မိဘကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဌေး ကလည်းပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က အခြေခံပညာကျောင်း များကို အစောဆုံးဇူလိုင်လဆန်း မှ ပြန်ဖွင့်မည်ဖြစ်ရာ ကျန်နေသေး သည့် အချိန်တစ်လခွဲအတွင်းတင် ပြချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများ ထံမှ သင်ခန်းစာများကို
လည်း အ မြဲ လေ့လာသင်ယူနေမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ မူလတန်းမှစဖွင့်မည့် အစား အထက်တန်းမှစဖွင့်ရန် လည်း လေးလေးနက်နက် ပြန် လည် စဉ်းစားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြေခံပညာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ …
‘‘အထက်တန်းကလေးတွေ က အရေအတွက်အားဖြင့် မူလ တန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီးနည်း လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ Social Distancing လုပ်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်လိမ့် မယ်ထင်တယ်။ နည်းတဲ့အခါကျ တော့ ပိုပြီးတော့ခွာခွာထားလို့ရ မယ်။
ကျောင်းချိန်တွေ အပြောင်း အလဲလုပ်တာကလည်း နည်း နည်းပိုကြီးတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ဆို ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါ တွေ အားလုံးထည့်စဉ်းစားမှာပါ’’ ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆို သည်။
ထို့အပြင် ဆရာ၊ ဆရာမ များအနေဖြင့်လည်း မူလတန်း ကလေးများအား စည်းကမ်းထိန်း သိမ်းခြင်းကိုကစားသည့် ပုံစံဖြစ် စေမည့်နည်းလမ်းများ စဉ်းစား သင့်ကြောင်း၊
ကျောင်းတွင် Social Distancing ဖြစ်စေမည့် ကစားသည့် နည်းလမ်းမျိုးသုံးကာ သင်ကြားပေးရန် စဉ်းစားစေလို ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောသည်။
နှရောသီ မှာ အရမျးပူပွီး ခြှေးထှကျ လို့ ဓာတျဆား ရညျ သောကျဖွဈရငျ ဒါတှေ သိထားပါ-
မွနျမာနိုငျငံဆေးဝါးလုပျငနျးစကျရုံကထုတျလုပျတဲ့ဓာတျဆား…နိုငျငံတကာမှတငျသှငျးရောငျးခတြဲ့ဓာတျဆားမြိူးစုံအပွငျဈေးကှကျထဲမှာ ရိုးရိုးဓာတျဆားမြား/သဈသီးစုံဓာတျဆားမြားအမြားအပွားရောငျးခနြပွေီး တမြိူးနဲ့တမြိူး အာနိသငျသိသာစှာကှာခွားခွငျးမရှိပဲအားလုံးကောငျးကွပါတယျ။အရညျအသှေးပွညျ့ဝပွီး ကွာရှညျအထားခံတာကတော့မွနျမာနိုငျငံဆေးဝါးစကျရုံ(MPF)ကထုတျတဲ့ ဓာတျဆားပါ။
ဓာတျတားထုတျဝယျတဲ့အခါပထမဆုံးကွညျ့သငျ့တာက သကျတမျးကုနျဆုံးရကျ(Expiry date)ပါ…Date ကောငျးတာနဲ့တငျမပွီးပါဘူး။လတျဆပျမှု့ရှိ/မရှိ လှုပျကွညျ့ရပါမယျ။ကပျနရေငျ(သို့)အထဲကအမှုံ့အရောငျပွောငျးနရေငျ လုံးဝမသောကျသငျ့ပါဘူး။
ဓာတျဆားတထုတျကို ရကေကျြအေး(သို့)ရတေဈလီတာ/ရသေနျ့တဗူးနဲ့ဖြျောရမှာပါ…။ သတိထားရမှာက ရနှေေးနဲ့မဖြျောရသလို… ရခေဲသတ်ေတာထဲကရအေေးနဲ့လဲမဖြျောသငျ့ပါဘူး…။ဓာတျပယျြသှားတတျလို့ပါ…။
ဓာတျဆားထုတျကိုအေးပွီးခွောကျသှတေဲ့နရောမှာထားသိုရမှာဖွဈပွီး…နရေောငျခွညျတိုကျရိုကျထိတှတေဲ့နရောတှမှော မထားသငျ့ပါဘူး…။ဓာတျဆားရညျကို ဖြျောပွီး ၂၄ နာရီအတှငျးကုနျအောငျသောကျရမှာဖွဈပွီး ၂၄ နာရီထကျကြျောသှားတဲ့ ဓာတျဆားရညျကို သှနျပဈရမှာပါ…။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ဓာတျဆားကို တဈရကျအမြားဆုံး ၂ ထုတျသာသုံးသငျ့ပါတယျ။ ၂ထုတျထကျပိုသောကျမိရငျခန်ဓာကိုယျကပိုနမေဲ့ဆားဓာတျကိုမစှနျ့ထုတျနိုငျပဲသှေးတိုးရောဂါဖွဈတတျလို့ပါ။ဓာတျဆားထုတျကို ဆီးခြိူ /သှေးတိုးရှိသူတှေ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြနဲ့မှသောကျသငျ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့တနျဆေးလှနျဘေးဆိုသလိုခြှေးထှကျအလှနျမြားတဲ့ယခုလိုနှရောသီမှာဓာတျဆားထုတျသောကျတဲ့အခါ…ဆငျခွငျစရာလေးတှကေို ကနျြးမာရေးဗဟုသုတအနနေဲ့ တငျပွလိုကျရပါတယျ။
နွေရာသီ မှာ အရမ်းပူပြီး ချွေးထွက် လို့ ဓာတ်ဆား ရည် သောက်ဖြစ်ရင် ဒါတွေ သိထားပါ-
မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံကထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်ဆား…နိုင်ငံတကာမှတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ဓာတ်ဆားမျိူးစုံအပြင်ဈေးကွက်ထဲမှာ ရိုးရိုးဓာတ်ဆားများ/သစ်သီးစုံဓာတ်ဆားများအများအပြားရောင်းချနေပြီး တမျိူးနဲ့တမျိူး အာနိသင်သိသာစွာကွာခြားခြင်းမရှိပဲအားလုံးကောင်းကြပါတယ်။အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကြာရှည်အထားခံတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးစက်ရုံ(MPF)ကထုတ်တဲ့ ဓာတ်ဆားပါ။
ဓာတ်တားထုတ်ဝယ်တဲ့အခါပထမဆုံးကြည့်သင့်တာက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်(Expiry date)ပါ…Date ကောင်းတာနဲ့တင်မပြီးပါဘူး။လတ်ဆပ်မှု့ရှိ/မရှိ လှုပ်ကြည့်ရပါမယ်။ကပ်နေရင်(သို့)အထဲကအမှုံ့အရောင်ပြောင်းနေရင် လုံးဝမသောက်သင့်ပါဘူး။
ဓာတ်ဆားတထုတ်ကို ရေကျက်အေး(သို့)ရေတစ်လီတာ/ရေသန့်တဗူးနဲ့ဖျော်ရမှာပါ…။ သတိထားရမှာက ရေနွေးနဲ့မဖျော်ရသလို… ရေခဲသေတ္တာထဲကရေအေးနဲ့လဲမဖျော်သင့်ပါဘူး…။ဓာတ်ပျယ်သွားတတ်လို့ပါ…။
ဓာတ်ဆားထုတ်ကိုအေးပြီးခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာထားသိုရမှာဖြစ်ပြီး…နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာ မထားသင့်ပါဘူး…။ဓာတ်ဆားရည်ကို ဖျော်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းကုန်အောင်သောက်ရမှာဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီထက်ကျော်သွားတဲ့ ဓာတ်ဆားရည်ကို သွန်ပစ်ရမှာပါ…။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတ်ဆားကို တစ်ရက်အများဆုံး ၂ ထုတ်သာသုံးသင့်ပါတယ်။ ၂ထုတ်ထက်ပိုသောက်မိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပိုနေမဲ့ဆားဓာတ်ကိုမစွန့်ထုတ်နိုင်ပဲသွေးတိုးရောဂါဖြစ်တတ်လို့ပါ။ဓာတ်ဆားထုတ်ကို ဆီးချိူ /သွေးတိုးရှိသူတွေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှသောက်သင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလိုချွေးထွက်အလွန်များတဲ့ယခုလိုနွေရာသီမှာဓာတ်ဆားထုတ်သောက်တဲ့အခါ…ဆင်ခြင်စရာလေးတွေကို ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။